Events , Thoughts And Memories In My Life: 2007
Days Beyond First Snowing Days
Rememberance For My Friends From A Little Town
Pretending To Be Irrelevant
Mandalay And Mosquito
I Like Writing!!
Oh.. NRC Card !
Present From My Reading
When We Retire...
Comment for Breeze
0 comments at Friday, December 21, 2007
၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇
0 comments at Sunday, December 09, 2007
နိုးသည်နေ့ ည မေ့မရသည်
0 comments at Sunday, November 18, 2007
မထင်မှတ်တာတွေ ဖန်ဆင်းတတ်တဲ့ ကံဆိုတာလား
နိုဝင်ဘာ ၁၈ ၂၀၀၇
0 comments at Wednesday, November 14, 2007
ကျွန်တော်နေခဲ့ဖူးတဲ့ အောက်မြန်မာပြည်က မြို့လေးတစ်မြို့ကို သတိရတဲ့အနေနဲ့ ဒီပို့စ်ကိုရေးဖြစ်ပါတယ်.. ဒီနေ့ပဲ အဲဒီမြို့လေးမှာ တစ်အိမ်တည်းနေခဲ့ကြတဲ့ သူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံခဲ့ရတယ်.. သူတို့တွေက မန္တလေးကို လာကြတာပါ.. လူချင်းမတွေ့ရတာ ၁၀စုနှစ်ကိုတော်တော်ကျော်နေပြီဆိုပေမယ့် ပြန်ဆုံတာနဲ့ အချင်းချင်း ချက်ချင်းမှတ်မိကြတယ်.. ပြီးတော့ စကားတွေပြောရတာလည်း အားမရနိုင်အောင်ကိုပဲ.. သူတို့ဆီမှာနေတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေ၊ လမ်းထဲကလူတွေကို နာမည်တွေ ဘယ်နားမှာနေတယ်ဆိုတာတွေပါ ကျွန်တော်က မှတ်မှတ်ရရမေးတဲ့အခါ သူတို့တွေ အံ့သြ၀မ်းသာကြပါတယ်.. သူတို့မြို့က ထွက်လာတော့ ကျွန်တော် အသက် ၁၀ နှစ်သာသာပဲရှိသေးတာ.. နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ပဲနေခဲ့တဲ့နေရာပေမယ့် အဲဒီမြို့က လူနဲ့ နေရာတော်တော်များများကို ကျွန်တော်မှတ်မိနေတာ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းလွန်းလို့ပဲလား ၊ အဲဒီမြို့ကကို အမှတ်ရစရာ ဖြစ်နေလို့လားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး..
မိတ်ဆွေဟောင်းနဲ့ ပြန်ဆုံဖြစ်တော့ မဆုံဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်.. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ချို့လည်း အိမ်ထောင်ကျကုန်ပြီ.. တစ်ချို့အသိတွေက သက်ရှိထင်ရှားမရှိကြတော့ဘူး.. ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ကျောင်းက ဆရာမတွေလည်း တစ်ချို့က ခုထိအပျိုကြီး ၊ တစ်ချို့က သားသမီးဘယ်နစ်ယောက် .. ဘယ်ကိုရောက်နေတယ်.. တစ်လမ်းတည်းအတူနေ ကစားဖော်ကစားဖက် သူငယ်ချင်းတွေထဲက ဘယ်သူတွေတော့ ဘယ်လိုကြီးပွားနေပြီ.. ငယ်ငယ်က တာတေလန်အောင်ဆိုးခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်မှာ သိပ်လိမ္မာပြီး အိမ်ကိုလုပ်ကျွေးနေပြီ.. တစ်ချို့သူငယ်ချင်းက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်.. စတဲ့စတဲ့ သတင်းတွေ ရခဲ့ပါတယ်..
ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကျော်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို အများကြီး ပြောင်းလဲစေတာပဲလို့ တွေးမိပါရဲ့... ကိုယ်က လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရချိန်မှာ တစ်ချို့အသိတွေက တစ်သက်စာအနားယူသွားပြီ.. တစ်ချို့အသိတွေက ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး ရုန်းကန်နေကြရတယ်.. အသက်ရှင်သရွေ့ ဆက်ပြီးရုန်းကန်ကြရဦးမယ်.. အဲသည်လူတွေထဲ ကျွန်တော်လည်း တစ်ယောက်အပါအ၀င်ပဲပေါ့..
လူတွေဆုံတွေ့ကြတယ်.. ခင်မင်ကြတယ်.. နောက် ကွဲကွာသွားကြတယ်.. ခဏကွဲတာရယ် ဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ခြင်းနဲ့ တစ်သက်လုံးကွဲတာရယ် နှစ်မျိုးပဲရှိမှာပါ..ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကွဲကွာသွားတဲ့ လူချင်းပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီသူတွေကို ၀မ်းသာအားရ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုနိုင်တဲ့သူ .. ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ ပြောဆိုရယ်မောနိုင်တဲ့သူပဲ အမြဲဖြစ်ပါရစေလို့ ဆုတောင်းမိပါရဲ့..
ဆရာတော်ရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့ “ဘယ်လောက်ဝေးဝေး နီးနီးလေး” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးဖတ်ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီထဲမှာ ရွှေဟင်္သာမင်းဇာတ်ထဲမှာ ဟင်္သာမင်းနဲ့ လူ့ပြည်ကမင်းတစ်ပါး မြင်မြင်ချင်းချစ်ခင် မိတ်ဆွေဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းကို ရေးပြထားပါတယ်.. ဗြဟ္မဒတ်မင်းနဲ့ ထင်ပါရဲ့.. (တိုင်းမသိ ဗာရာဏသီ.. မင်းမသိ ဗြဟ္မဒတ်လုပ်ချလိုက်ပြီ..ဟီးဟီး ).. ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီးက ရွှေဟင်္သာမင်းကို ချစ်လွန်းလို့ နေရပ်ကိုမပြန်ဘဲ နန်းတော်ထဲမှာ အပြီးနေဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်.. အဲဒီမှာ ဟင်္သာမင်းပြန်ပြောတဲ့ စကားလေးကို သိပ်သဘောကျမိလို့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်တာပါ..
ရွှေဟင်္သာမင်းက ဘာပြောလဲဆိုတော့ “အရှင်မင်းကြီး တစ်ချို့လူတွေဟာ အချင်းချင်း မမြင်ဖူးဘဲနဲ့ သတင်းကြားရုံနဲ့တင် ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတယ်.. ဒါပေမယ့် လူချင်းတကယ်တွေ့တော့ မချစ်ခင်ဘူး.. တစ်ချို့တွေကျတော့ သတင်းကြားရုံနဲ့တင် ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသလို အချင်းချင်းဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါလည်း ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတယ်.. ဒါပေမယ့် အတူနေဖန်များလာတဲ့အခါကျတော့ မချစ်ခင်နိုင်တော့ဘဲ အချင်းချင်း မုန်းသွားတတ်ပါတယ်.. အဲဒါကြောင့် အရှင်မင်းကြီးနန်းတော်မှာ အမြဲတမ်းမနေပါရစေနဲ့.. တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင် တစ်လတစ်ခါဖြစ်စေ.. အချိန်အတန်ကြာမှ နန်းတော်ကို လာခဲ့ပါ့မယ်” လို့ ပြောပါတယ်..
အဲလိုစကားမျိုးကို ဦးအေးမောင်ရေးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးလိုက်ပါသေးတယ်.. မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆိုတာ အမြဲတမ်းဆုံတွေ့နေတာထက် လိုအပ်မှ ဆုံတွေ့တာမျိုးဟာ ချစ်ခြင်းကို ပိုရှည်စေတယ်လို့ ရေးထားတာလေးပါ.. သိပ်ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လွန်းအားကြီးသွားရင် ခင်မင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ လေးစားစရာအချက်တွေကို သိပ်မမြင်တော့ဘဲ (ဒါမှမဟုတ် ) အလေးမထားတော့ဘဲ နေမိတတ်တယ်.. တစ်ခါတလေ မပြောသင့်မပြောအပ်တဲ့ စကားမျိုးလည်း ပြောမိတတ်တယ်.. အဲဒါနဲ့တင် မိတ်ပျက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. အမြဲတမ်းမှန်တဲ့အချက်မဟုတ်ပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆမိတယ်..
ကျွန်တော့်မှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း အများကြီးရှိပါတယ်.. အဲဒီထဲမှာ အမြဲမပြတ်ဆုံတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးက သိပ်ရှားတယ်လို့ ပြောရမယ်.. အလုပ်အတူလုပ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးပဲ အများစုရှိမယ်ပေါ့.. ဒါပေမယ့် အလုပ်ရောက်ရင် သူ့အလုပ် ကိုယ့်အလုပ် လုပ်နေတာနဲ့ပဲ ရင်းနှီးတယ်ဆိုဦးတော့ အရမ်းကြီးအကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်မလာတော့ဘူး.. ဒါကြောင့်များ အချင်းချင်းကြားမှာရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ရှည်ကြာနေတယ်ထင်ပါရဲ့..
0 comments at Saturday, October 13, 2007
အိပ်မက် မက်တယ်..အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်ဖို့ဝေးတဲ့ အိပ်မက်ပေါ့.. အိပ်မက်အကြောင်းတွေးရင်းနဲ့ တကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အနေအထားကို ကြည့်လိုက်တော့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆကသင့်တဲ့ အနေအထားမှာတင် ဖက်လှဲတကင်း တရင်းတနှီးနှုတ်ဆက်မိတဲ့ အနေအထားမျိုးလို့ပဲ ကိုယ့်အဖြစ်ကို မြင်မိနေတော့တယ်.. အဲဒါကြောင့် အခြေအနေ အခွင့်အလမ်းတွေ မဆုံးရှုံးသင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးခဲ့တာလို့ တွေးနေမိပါရဲ့...
yifyef;EGrf;e,ftm;BuD;olwdkU tjrefoufomap&ef a&S;OD;olemjyKpkwJh enf;vrf;tcsKdUudk udk*sLvdkiftdyfruf&JU bavmhhrSm zwf&SKavhvmEdkifygw,f...
0 comments at Saturday, September 22, 2007
ရန်ကုန်မှာ မိုးသိပ်များလို့ ရေကြီးနေတယ်.. မန္တလေးမှာလည်း အရင်တစ်ပတ် စနေ-တနင်္ဂနွေနေ့က မိုးသည်းသည်းမည်းမည်းရွာလိုက်တာ အင်းခရုဘက်မှာ ရေကြီးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်..(သတင်းက နောက်တောင်ကျနေပါပြီ).. ဟိုတစ်ရက်က အလင်းလှိုင်းအလှူကိစ္စအတွက် လှုပ်ရှားတော့ ညီမလေးတစ်ယောက်ပြောလို့သိရတာပါ.. အစ်မတို့ ရေဘေးအလှူအတွက် မလုပ်သေးဘူးလားလို့ သူကမေးလာမှ ဘယ်မှာဘာဖြစ်နေလဲလို့ စုံစမ်းမိတော့တယ်.. အင်းခရုဘက်မှာ ရေတွေကြီးနေတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်.. ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက တော်ပေါ်ပြန်ဖြစ်တော့ အောင်ပင်လယ်ဘက်ကအိမ်တွေကို ကားပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်.. တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ရေရှိနေပါသေးတယ်..ခုချိန်တော့ ရေပြန်ကျသွားပြီလား မပြောတတ်ပါဘူး..
ဒီရက်တွေ အရင်စနေ-တနင်္ဂနွေလိုမျိုး မိုးဆက်မရွာတာ ကျေးဇူးတင်ရမယ်.. မဟုတ်ရင် ရုံးကိုမိုးထဲရေထဲကနေ လာနေရဦးမှာမို့လေ..
0 comments at Wednesday, September 19, 2007
ဒီရက်ပိုင်း မန္တလေးမှာ မနက်ခင်းဆို မိုးသည်းသည်းမည်းမည်းရွာနေတယ်.. ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်လုံးမိုးရွာလို့ ရေတွေတောင်လျှံတယ်.. မုတ်သုံလေက စက်တင်ဘာမှာ ဆုတ်ခွါမယ်လို့ မိုးလေ၀သနဲ့ဇလဗေဒဌါနကတော့ ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ထားတာပဲ.. ဒီနှစ် မုတ်သုံလေက နောက်ကျမှဝင်ပြီး စောစောစီးစီးဆုတ်ခွါသွားတယ်.. သူလာတာ ဇူလိုင်လောက်မှလေ.. ခါတိုင်းနှစ်တွေက ဇွန်လောက်မှာ မုတ်သုံလေ စ၀င်ပြီး အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းရက်တွေမှ မုတ်သုံလေဆုတ်တာ.. ခုတော့ စက်တင်ဘာမှာတဲ့..
ရာသီတွေ ဖောက်ပြန်တော့ ရာသီကိုမှီ ပွင့်တဲ့ပန်းတွေလည်း ဖောက်ပြန်ကုန်တယ်.. မိုးရွာတဲ့သုံးရက်လုံး ကျွန်တော်တို့အိမ်က ပိတောက်ပင်က ပိတောက်ပန်းပွင့်တယ်.. လှိုင်လှိုင်ပွင့်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး.. တစ်ခက်နှစ်ခက်ပေါ့.. အရင့်အရင်နှစ်တွေက ပိတောက်ပွင့်ရင် ပန်ဖြစ်ခဲပါတယ်.. ပန်းပွင့်ဆိုရင် ခူးပန်လိုက်တာထက် အပင်မှာ အလှကြည့်ထားရတာကို ပိုသဘောကျတဲ့အတွက် ပန်းပန်ခဲပါတယ်..ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်မတိုင်ခင်က အပင်မှာ အဆုပ်လိုက်အခဲလိုက် ပွင့်တော့မလို့အားယူနေတဲ့ ပိတောက်ဖူးတွေကိုကြည့်ပြီး ပိတောက်ပန်းကို သိပ်ပန်ချင်ခဲ့တာပဲ.. အဲလို တတမ်းမက်မက်ပန်ချင်ခဲ့လို့ထင်ပါရဲ့.. ပိတောက်ပန်းပွင့်ချိန်မှာ ရှိမနေခဲ့ဘူး.. သင်္ကြန်အမီပွင့်တဲ့ပိတောက်ကို မပန်ခဲ့ရဘူး.. သင်္ကြန်ပြီးမှပဲ တစ်ကျော့ပြန်ပွင့်တဲ့ ပိတောက်ပန်းကို ပန်ရတယ်.. ဒီနှစ်မှာ ပိတောက်ပန်းကို သိပ်တမ်းတနေခဲ့လို့လားမပြောတတ်ဘူး.. သင်္ကြန်အပြီး နွေလွန် မိုးနှောင်းထိ ပိတောက်ကို အမုန်းပန်နေရတယ်.. ပိတောက်ရယ် ငါ့ဆီအရောက်နောက်ကျလိုက်တာလို့ ပြောချင်ပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ မမုန်းဖြစ်ပါဘူး.. ကိုယ်ပန်ချင်တဲ့ပန်းပဲလေ.. ဘယ်အချိန်ရောက်ရောက် တန်ဖိုးထားခြင်းက မပျက်ပါဘူး..
မိုးရွာလို့ပွင့်တဲ့ ပိတောက်ပန်းပန်တဲ့နေ့ဆို ကျွန်တော့်ဆံစက ပိတောက်တွေကိုကြည့်ပြီး ပိတောက်က သစ္စာမရှိတော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့သူတွေပြောကြတယ်.. ရာသီကိုမှီ ပွင့်ရတဲ့ပန်း ရာသီဖောက်ပြန်တော့ သူ ပွင့်ရမယ့်အချိန်ကို မသိတော့တာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး.. သူပွင့်တော့ ကိုယ်ပန်ရတယ်.. အနည်းဆုံးတော့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့စိတ်ကို သူ့အသွင် သူ့အလှနဲ့ အံ့သြလန်းဆန်းစေသေးတယ်မဟုတ်လား.. အသိဥာဏ်မဲ့တဲ့ပန်းကို သစ္စာရှိဖို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်မထားဘူး.. အသိဥာဏ်ရှိ ၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် ၊ ကိုယ့်အကျင့်ကိုကိုယ် ပြုပြင်ယူလို့ရတဲ့ “လူ” တွေထဲမှာရော သစ္စာစောင့်သိသူ ဘယ်နှယောက်များ လက်ညှိုးထိုးပြစရာရှိနေလို့လဲ.. တစ်ချို့လူတွေဆို သူရှိနေခြင်း ရပ်တည်နေခြင်းကတောင် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အရုပ်ဆိုးအောင် ပြုလုပ်နိုင်ကြသေးတယ်မဟုတ်လား.. အဲဒါကြောင့် အဲလိုလူတွေထက်စာရင် ပိတောက်က သာပါသေးတယ်လို့ တွေးမိပါရဲ့..
ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်အမှီ သူပွင့်ပေးခဲ့တယ်.. သူ့တာဝန်ကျေပါပြီ.. နောက်ထပ်ပွင့်လာတာ သူသစ္စာမရှိလို့လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ဘဲ အပိုဆုရတာလို့.. အနည်းဆုံး သူနဲ့ထိစပ်နေတဲ့သူတစ်ဦးစ နှစ်ဦးစကို သူ့အလှ ၊ သူ့ ရနံ့နဲ့ စိတ်ကြည်လင်စေတာလို့ ပဲ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်.. ပိတောက်ရေ.. နောက်ရက်တွေရော နင်ရောက်လာဦးမှာလားဟင်လို့ ပိတောက်ပင်ကြီးကို မေးလိုက်ချင်ပါရဲ့လေ..
ခုနောက်ပိုင်း.. ကိစ္စတော်တော်များများကို စိတ်ထဲမှာ အကြာကြီးမထားဖြစ်တော့ဖို့ ကြိုးစားနေတာကြောင့်လား မပြောတတ်ဘူး.. တစ်ချို့ဟာတွေကိုဆို အစဖော်မရအောင် မေ့နေပြီ.. အဲဒါဟာ ကောင်းတာလား မကောင်းတာလား မသိဘူး..
ပြီးတော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ သူများကို အရွဲ့တိုက်ပြီးလုပ်တယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး.. မလုပ်မိအောင်လည်း နေတယ်.. ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်ပြီဆို ကိုယ်လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာမျိုးပဲ ဖြစ်အောင် စိတ်ကို ပြောင်းလဲယူပစ်လိုက်တယ်.. သူများကိုရွဲ့ပြီးလုပ်တယ်ဆို သူများရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆလေး ၀င်နေတာလည်း ပါတယ်ပေါ့.. ပြီးတော့ သူများအကြောင်းကို ခေါင်းထဲထည့်ထားရတာ ပင်ပန်းမှန်း ခံစားမိလာတယ်.. ဒီလိုပြောလို့ သူများကိစ္စဆို ခေါင်းထဲလုံးလုံးမထားတတ် သူများအတွက် မတွေးပေးတတ်တဲ့ လက်လွတ်စပယ်လူမျိုးဖြစ်အောင်အထိတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ခေါင်းထဲထည့်ထားသင့်သူ ထည့်ထားသင့်တဲ့ကိစ္စမျိုးလောက်ပဲ ရှိနေအောင် ကြိုးစားနေဖြစ်တော့တာ.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ကျွန်တော်တို့ နေရတဲ့ဘ၀က တိုတိုလေးပါ.. ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အရေးမပါ အရာမရောက်တဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပစ်ရမယ်ဆို ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာတွေ မလုပ်လိုက်ရဘဲ နေမှာပေါ့.. ဒီလို တွေးထားတာတောင် လုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေကို ရာနှုန်းပြည့် မလုပ်နိုင်သေးတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တွေ့နေရတယ်..
နောက်တစ်ခု သူများကို အရွဲ့တိုက်ပြီးတစ်ခုခုလုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်စံနှုန်းနဲ့ မကိုက်၊၊ ကိုယ့်စံတွေကနေ သွေဖယ်သွားတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခံစားမိတာမို့ အရွဲ့တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ မလုပ်မိအောင် နေမိတာလည်း ဖြစ်မယ်.. ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းသိလာတာနဲ့အမျှ အရွဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာ ကလေးဆန်တဲ့အပြုအမူ စာရင်းထဲ ထည့်ထားမိလိုက်တာကြောင့် လူကြီးဆန်ချင်တဲ့ကျွန်တော် အရွဲ့တိုက်တဲ့အလုပ်တွေ မလုပ်ဖြစ်တာပဲ နေမှာပါ.. ရှိသေးတယ်.. အရွဲ့တိုက်ရင် ဖျောက်ဖျက်ဖို့ ကိုယ်ကြိုးစားနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့် မကောင်းတဲ့စိတ်လေးတွေလည်း ပြန်ပြန်ရောက်လာတတ်လို့ နေလိမ့်မယ်.. ဒီ့အပြင် အရွဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်လုံး အရှုံးမရှိတဲ့အနေအထားကို မဖန်တီးနိုင်ဘူးလို့ ယူဆမိလို့လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့နေ ကြားနေရတဲ့ ငါက သူများထက် ပိုရွဲ့တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ယူတာလား .. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်တင်တာလားမသိတဲ့ (အမှန်ကတော့ ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကို
သေချာမဖြေရှင်းနိုင်တာနဲ့ပဲ အလွယ်ကောက်သုံးလိုက်တဲ့ ဆေးမြီးတို ) စကားတစ်ခုကို ၊ ကိုယ့်အတ္တကို လွဲမှားစွာ အရောင်ပြန်တင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို ကိုယ်ကျင့်သုံးနေမိသေးလားလို့ ပြန်စဉ်းစားရင်း ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်တာပါလေ..
1 comments at Sunday, September 09, 2007
မန္တလေးကို ကျွန်တော် ရောက်ဖူးတာ လူမှန်းသိတတ်စ အရွယ်ကတည်းက ဆိုပါစို့.. ငယ်ငယ်က အလည်အပတ်သဘောနဲ့ ခဏတဖြုတ် ခဏခဏရောက်ပါတယ်.. အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့တည်းခိုရာအိမ်က မြို့စွန်လို့ခေါ်လောက်တဲ့ နေရာမှာပါ.. သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်ပေါတဲ့ ကွက်သစ်လေးတစ်ခုပါ.. ညနေစောင်းပြီဆိုရင် လူသွားလူလာ အတော်ပြတ်ခဲ့တဲ့ နေရာပေါ့.. မှတ်မှတ်ရရ တစ်မြို့လုံးနီးပါး မီးလောင်တဲ့နှစ်မှာလည်း မန္တလေးကို ရောက်ပါသေးတယ်.. မီးလောင်ပြင် ကြီးကြီးမားမား မြင်ဖူးခဲ့တာပါပဲ.. နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ မန္တလေးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် သုံးလတစ်ကြိမ် ၊ လေးလတစ်ကြိမ်လောက်ရောက်တဲ့ နေရာဖြစ်လာတယ်.. တစ်ခါလာရင် အပြောင်းအလဲတစ်မျိုးကြုံရပါတယ်.. မြို့သစ်တွေ တိုးလာတယ်.. မြို့ထဲဆိုတဲ့နယ်ပယ်ဟာ ပိုကျယ်လာတယ်.. အရင့်အရင်ကဈေးချိုတစ်ဝိုက်မှာ အင်မတန်များခဲ့တဲ့ မုန့်တီဆိုင်တွေ ပျောက်ကုန်တယ်.. ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေ ရောက်လာတယ်.. ၀က်သားတုတ်ထိုးဆိုင်တွေ ပေါလာတယ်.. ငယ်ငယ်က စီးခဲ့ဖူးတဲ့ သုံးဘီးကားတွေ မရှိတော့ဘူး.. မြင်းလှည်းတွေလည်း သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူး.. ကျူံးရေပြင်ကလည်း ပိုနက်သွားတယ်.. စက်ဘီးအစား ဆိုင်ကယ်တွေ အစားထိုးလာတယ်ပေါ့.. ကျွန်တော်မသိတဲ့ ဒိပြင် အပြောင်းအလဲများစွာလည်း ရှိဦးမှာပါ..
ဒါပေမယ့် မပြောင်းမလဲတဲ့ အရာတွေလည်း မန္တလေးမှာ ကျန်နေခဲ့ပါသေးတယ်.. အဲဒါက အိမ်တိုင်းနီးပါးရဲ့ရှေ့မျက်နှာစာမှာ ရေမြောင်းရှိနေတာရယ် ၊ ခြင်အလွန်ကိုက်တာရယ်ပါ.. ရေမြောင်းမှာလည်း အပြောင်းအလဲတော့ ရှိပါသေးတယ်.. အရင်တုန်းက ရေမြောင်းကရေတွေဟာ အလွန်သန့်ပါတယ်.. ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရ သန့်တာ မသန့်တာကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး.. မြောင်းထဲကရေပေမယ့် ရွှံ့ဗွက်မဖြစ်ဘဲ ရေကြည်နေတာကို ပြောတာပါ.. အဲဒီရေနဲ့ ပန်းကန်ဆေးလို့ရတယ်.. ကျွန်တော်တို့ တည်းတဲ့အိမ်မှာဆို အဲဒီမြောင်းထဲကရေနဲ့ ခြေတောင်မဆေးရပါဘူး.. ရေကို အသန့် ပဲ ထားပါတယ်.. ခုတော့ ရေမြောင်းရေတွေ မကြည်တော့ဘူး.. တော်တော်ကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ မြောင်းရေဖြစ်နေပါပြီ.. အဲ.. ဒါဆိုရင် မန္တလေးရဲ့ မပြောင်းလဲတဲ့ အကြောင်းတရားထဲမှာ ရေမြောင်းကို ထည့်လို့မရတော့ပြန်ဘူး..
ခြင်ကိုက်တာတစ်ခုကိုပဲ မပြောင်းလဲတဲ့ အကြောင်းတရားအဖြစ် ညွှန်ရပါတော့မယ်.. ဟုတ်ပါတယ်.. ခြင်ကတော့ အရင်ကလည်း အလွန်ကိုက်တယ်.. ခုလည်း အလွန်ကိုက်တုန်းပါပဲ.. တစ်ခါတစ်ခါများ တွေးမိတယ်.. အေ့ဒ်စ်ရောဂါက ခြင်ကိုက်ရာကနေများ မကူးတတ်လို့.. ကူးတတ်ရင် မန္တလေးတစ်မြို့လုံး ကုန်မှာပဲလို့လေ.. ခြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ အရင်နဲ့ အခုကွာတာ ခြင်နှင်တဲ့နည်းပါ.. အရင်က နနွင်းတက်ကို မီးရှို့ထားတဲ့ နနွင်းမှိုင်းနဲ့ နှင်တယ်.. ခုကျတော့ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ခြင်ဆေးခွေတွေသုံးပြီးနှင်တယ်.. လျှပ်စစ်ခြင်ရိုက်တံသုံးပြီး နှင်တယ်.. ခြင်ပေါတယ် မပေါတယ်.. ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်မှာဆို ခြင်ဆေးခွေဝယ်ဖို့အတွက် အစားကိုခြိုးခြံရတယ်လို့ ကြားဖူးပါရဲ့.. ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေအတွက်တော့ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ခြင်နှင်နည်းက ခြင်ဆေးခွေထွန်းတာပါ.. ဘယ်လိုနှင်နှင် ဘယ်လိုနှိမ်နှိမ် ကိုရွှေခြင်တွေက မဖြုံပါဘူး.. ညနေခင်းတင်မက နေ့ခင်းပါကိုက်တော့ ကလေးတွေပဲအိပ်အိပ် ၊ လူကြီးတွေက တရေးတမောပဲနှပ်နှပ် ခြင်ဆေးကိုပဲ အားကိုးရပါတယ်..
အဲဒါကြောင့် မန္တလေးမှာနေရင် ခြင်ဆေးခွေက မရှိမဖြစ်ပေါ့.. ခြင်ဆေးခွေတွေက ခြင်မကိုက်အောင် ၊ ခုတလောခေတ်စားနေတဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးမဖြစ်အောင် ကယ်တင်တဲ့ ကျေးဇူးရှင်လို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် စက်တင်ဘာလထုတ် ကလျာမဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာမဂျူးရေးတဲ့ “ခြင်ဆေးခွေထွန်းမှာလား ” ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ခြင်ဆေးခွေကို ကျေးဇူးရှင်လို့ မပြောနိုင်တော့ပါဘူး.. ခြင်ဆေးတစ်ခွေကထွက်တဲ့ အခိုးအငွေ့တွေဟာ ဆေးလိပ် ၅၁ လိပ်ကထွက်တဲ့ အခိုးအငွေ့နဲ့ ညီမျှပြီး ခြင်ဆေးခွေကထွက်တဲ့ အမှုန်အမွှားတွေ အဆုတ်ထဲရောက်တာက ဆေးလိပ် ၁၃၇ လိပ်နဲ့ ညီမျှပါသတဲ့.. စုစုပေါင်းလိုက်ရင် ခြင်ဆေးတစ်ခွေက ဒုက္ခပေးနိုင်တာ ဆေးလိပ် ၁၈၈ လိပ်နဲ့ ညီနေပါရော.. ဆေးလိပ်နံ့ကို ကြောက်တဲ့ကျွန်တော် ခြင်ဆေးတစ်ခွေထွန်းရမှာတောင် တော်တော်ကြောက်သွားပါတယ်..
ကိုယ်ကသာ ခြင်ဆေးထွန်းရမှာကြောက်တာ.. ခြင်တွေက မကိုက်ဘဲ နေမှာမဟုတ်တော့ ဆရာမဂျူးရဲ့ ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရင်း အတော် အကျပ်ရိုက်သွားပါတယ်.. ဒါနဲ့ ဆက်ဖတ်တော့.. နနွင်းမှိုင်းက အဆုတ်ကိုထိနိုင်ပေမယ့် ခြင်ဆေးလောက် အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ ဆရာမက ပြောထားပါတယ်.. ဒါပေမယ့် နနွင်းမှိုင်းကလည်း အန္တရာယ်အကင်းဆုံးလို့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး.. ထင်းတို့ ၊ သစ်တိုသစ်ဆွေးကထွက်တဲ့ မီးခိုးမှိုင်းတွေဟာလည်း လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်စေသေးတယ်တဲ့.. တီဗွီမှာကြော်ငြာနေတဲ့ ခြေလက်တွေကို ခြင်မကိုက်အောင်လိမ်းတဲ့ဆေး ၊ ခြင်ထောင်စိမ်တဲ့ ဆေးတွေကလည်း ခြင်မကိုက်အောင်သာကာကွယ်နိုင်တာ တကယ်တမ်းကျ အဆိပ်သင့်စေတဲ့ ဆေးတွေပါပဲတဲ့.. ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရင်းနဲ့ အတော်ရင်မောသွားပါတယ်.. ခြင်အန္တရာယ်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမှာပါလိမ့်နော်..
ဆရာမဂျူးကတော့ ခြင်မကိုက်အောင် ကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ ပေးထားပါတယ်.. အကောင်းဆုံးကတော့ ခြင်လုံဇကာနဲ့ နေတာပါပဲတဲ့.. တခြားနည်းတွေကတော့ .. ပန်ကာဖွင့်ထားပေးတာ(ဒီနည်းက မီးလာမှ အဆင်ပြေမယ့်နည်း..) .. လေအေးစက်ဖွင့်ပေးထားတာ (ဒီနည်းက ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကို ပိုဆိုးစေတယ်တဲ့..သိပ်မဟန်ဘူးပေါ့ ).. ကလေးတွေကို ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ပေးထားတာ.. အိမ်ထဲမှာ စက္ကူ.. စတဲ့အမှိုက်တွေ ရှင်းလင်းထားတာ.. နို့ဆီခွက် ၊ ရေခွက် ၊ ကစားစရာအိုးပုတ်ကအစ ပက်လက်မထားဘဲ ရေမ၀င်နိုင်အောင် မှောက်ထားတာ.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခြင်ဖြစ်မယ့်လောက်လန်းဟာ ရေအကပ်အသပ်မရှိရင်တောင် ရေောစးအလာကိုဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ စောင့်နိုင်တဲ့ အကောင်ပါတဲ့..
ပြီးတော့ ခြင်တွေဟာ အလင်းရောင်ကိုကြိုက်တယ်.. ဆီမီးရောင် ၊ ဖယောင်းတိုင် ၊ လူကထွက်တဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နံ့နဲ့ ချွေးနံ့ ၊ ဆားကဲတဲ့ အစားတွေစားပြီး ထွက်တဲ့အနံ့ ၊ ငှက်ပျောသီးစားတဲ့လူကထွက်တဲ့အနံ့တွေကိုကြိုက်ပါသတဲ့.. ခြင်မကိုက်စေချင်ရင်တော့ အဲဒီအချက်တွေ မဖြစ်အောင် ရှောင်ရမယ်ဆိုပါတော့..
ခြင်ကြိုက်တဲ့အရာတွေရှိသလို ခြင်ကြောက်တဲ့၊ ခြင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေလည်း ရှိပါသတဲ့.. အဲဒါတွေကတော့ စပါးလင်နံ့ ၊ ပင်စိမ်းနံ့ ၊ ယူကလစ်နံ့ ၊ ကြက်သွန်ဖြူနံ့တွေကို ခြင်မကြိုက်ဘူး.. ရေဗွက်ရေအိုင်ပေါတဲ့အရပ်မှာ အဲဒီအပင်တွေကို စိုက်ထားရင် ခြင်မလာဘူး.. အဲဒီအပင်တွေကထွက်တဲ့ အဆီကို ခြေလက်တွေမှာ လိမ်းထားနိုင်ရင် ခြင်မကိုက်ဘူးလို့ ဆရာမက ဆိုပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မျက်စိထဲမ၀င်အောင်တော့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်.. ကြက်သွန်ဖြူ စားထားရင်တော့ လူကထွက်တဲ့ချွေးမှာ သူ့အဆီပါသွားတဲ့အတွက် ခြင်ကိုက်သက်သာပါလိမ့်မယ်တဲ့.. အလွယ်ဆုံးနဲ့အသက်သာဆုံး ခြင်ကိုက်သက်သာနိုင်မယ့်နည်းကတော့ သနပ်ခါးထဲ သံပုရာသီးညှစ်ပြီး လိမ်းတာလို့ ဆရာမရဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရင်း ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်..
ခြင်ပေါတဲ့မန္တလေးအတွက် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ ခြင်နှင်ရေးနည်းလမ်းတွေမို့ ကျွန်တော်ဖတ်ထားသမျှထဲက မှတ်မိသမျှ ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်.. ခြင်ဆေးခွေအန္တရာယ်နဲ့ ခြင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရေးပြတဲ့ ဆရာမဂျူးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီပို့စ်မှာပဲ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်..
1 comments at Sunday, September 02, 2007
လူတစ်ယောက်မှာ မျက်နှာဘယ်နှစ်ခု ရှိနိုင်ပါသလဲ..။ တစ်ယောက်တည်းမို့ မျက်နှာတစ်ခုတည်း ရှိသင့်သလား။ မျက်နှာတစ်ခု ထက်ပိုရှိသင့်တယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လောက်များများ ရှိနိုင်သလဲ ..။ မျက်နှာတစ်ခုတည်းရှိသူကို ချီးကျူးသင့်ပြီး မျက်နှာအများကြီးရှိသူကို အပြစ်တင်သင့်သလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတွေ့ဖူးသော လူတစ်ယောက်မှာတော့ မျက်နှာတစ်ခုထက်မက ရှိနေသည်။ သူ့ကို .. မောင် ..လို့ပဲ ခေါ်ကြပါစို့။
မောင့်ကို တွေ့ဖူးခါစက သုန်မှုန်နေသော မျက်နှာနှင့်...။ လူမရှိသော စာသင်ခန်းက နောက်ဆုံးစာသင်ခုံမှာ မောင်တစ်ယောက်တည်း အဖော်မဲ့ငြိမ်ဆိတ်စွာထိုင်လျက်...။ အတန်းနောက်ဆုံးက အမှိုက်ပုံးထဲ ချိုချဉ်ခွံလာပစ်သော ၊တစ်ဖက်စာသင်ခန်းက ရောက်လာသော ကျွန်မကို မောင်ကဖျတ်ခနဲ မော့ကြည့်သည်။ မောင့်မျက်နှာက တင်းသလိုလို မှုန်သလိုလို ပေမယ့် မောင့်အကြည့်တွေက စူးရှလှသည် ။ တစ်ဖက်သား ရင်ထဲကို ထွင်းဖောက်ပြီး ကြည့်တတ်သော အကြည့်မျိုး။ အင်မတန်တည်ငြိမ်သော စိတ်နှလုံးဆီမှ လာသောအကြည့်မျိုး။ အဲဒီတစ်ခါလေးဆုံဖူးရုံနှင့်ပင် မောင့်ရင်ထဲမှာ မောင့်စိတ်ကို လေးလံစေသော အရာတစ်ခုခု ရှိနေမည်ဆိုတာ ကျွန်မအကဲခတ်မိသွားသည်။ မောင့်မျက်နှာနှင့် မောင့်အကြည့်က အနည်းငယ် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေခဲ့သည်ပဲ ။ တည်ငြိမ်စူးရှသည့်အကြည့်နှင့် ခပ်မှုန်မှုန် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသည့် မျက်နှာပေးက လိုက်ဖက်စပ်ဟပ်မှုမရှိ၊ အနည်းငယ် တေ့လွဲလွဲနေသလိုပင်။ ဒါ...မောင့်ကို ပထမဦးဆုံးမြင်ဖူးစ ၊ ကျွန်မ မှတ်မိသော မျက်နှာ....။
နောက်ထပ်မှတ်မိနေသော မောင့်ရဲ့ အခြားမျက်နှာတစ်ခုက ကျောင်းသက်ဒုတိယနှစ်... ကျောင်းကအပြန် ကားပေါ်မှာမြင်ခဲ့ရသည် ...။ ကျွန်မကို တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နှင့် မထိခလုတ် ထိခလုတ်ဝိုင်းစနေသော မောင့်သူငယ်ချင်းများကြားမှာ မောင်က တေမိ။ ၀င်လည်း မစ၊ တားလည်းမတား ဘာသိဘာသာနေသည်။ တစ်ခုပါပဲ..အဲဒီအချိန်က မောင့်မျက်နှာ ကြည်လင်နေတာ မှတ်မိသည်။ ကြည်လင်ပေမယ့် တစ်ဖက်သားကို မခန့်လေးစားပြီတီတီ မျက်နှာပေးမျိုးမဟုတ်။ ကြည်၍တည်သည့် မျက်နှာမျိုး ..။ ကျွန်မ အင်မတန်နှစ်သက်သော မောင့်မျက်ဝန်းတွေကလည်း တွေ့ဖူးစကလိုပဲ လေးနက်တည်ငြိမ်လျက်..။ ကားပေါ်က ဆင်းခါနီးမှာ မောင်က ကျွန်မကို ဖျတ်ခနဲကြည့်ပြီး ပြုံးသွားသည်။ အစအနောက်သန်ကြသော မောင့်သူငယ်ချင်းများကြောင့် ဖြစ်လာသော အားနာပြုံးလား မဆိုနိုင်..။မောင့်ရဲ့ အပြုံးမျက်နှာကို ပထမဆုံးအကြိမ် မြင်ဖူးခြင်းပင် ..။
နောက်တစ်နှစ်လောက်မှာ ကျောင်းပြီးသွား၍ အလုပ်တစ်ဖက်နှင့် ဘွဲ့လွန်ဆက်တက်သော မောင်နှင့် ပြန်ဆုံရသည်။ ဒီတစ်ခါ ပြန်ဆုံရသော မောင့်မျက်နှာက အရင်လိုမဟုတ်တော့...။ သုန်မှုန်ခြင်း ကင်းနေသည်။ ကြည်စင်ခြင်းရဲ့ ဟိုဘက်ကို နည်းနည်းလွန်နေသည်။ အရင်လို မျက်နှာမျိုးရှိဖို့ တမင်ကြိုးစားထားရသော မျက်နှာပေးမျိုး ..။ အထူးသဖြင့် မောင့်မျက်နှာပေါ်က မျက်ဝန်းအကြည့်တွေ..။ အရင်လို မတည်ငြိမ်တော့ ။ အနည်းငယ်လှုပ်ခတ်နေသည်...။ စူးရှလေးနက်သောအကြည့်တွေအစား ရွှန်းစိုတောက်ပသော ၊တဖျတ်ဖျတ် အရည်ကြည်လဲ့သော အကြည့်တွေက ၀င်ရောက်နေသည်။ ဘယ်လိုအရာတွေက မောင့်မျက်နှာရဲ့ တည်ကြည်ခြင်း ၊ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေရဲ့ လေးနက်ခြင်းကို ဖျက်ဆီးပစ်သလဲ။ ရည်မှန်းချက်များ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိပြည့်ဝသွား၍ ကျေနပ်ခြင်းတွေနှင့် လျှော့ချပစ်လိုက်သော စိတ်အခြေအနေကြောင့်လား ..။ လုပ်ငန်းသဘာဝအရ လက်ပွန်းတတီးရှိနေသော ချက်တင်ဆိုတာကြောင့်လား။ မိန်းကလေးနှင့် ကင်းရှင်းသည်ဟု နာမည်ကြီးခဲ့သော မောင်က .. ခုကျတော့ ဖုန်း၊ ချက်တင်နှင့် မိန်းကလေးတွေနှင့် ကြည်တတ် အီတတ်ပြီဆိုသော သတင်းတွေက မကြားချင်မှ အဆုံး ...။ အဲဒါတွေကို သာယာတတ်သွားသော မောင် .. တည်ငြိမ်လေးနက်သောမျက်နှာကနေ မိန်းကလေးတွေကို ဂရုပြုမိလျက်နှင့် မပြုမိယောင် ၊ မိန်းကလေးများကို ဂရုစိုက်ချင်လျက်နှင့် ဂရုမစိုက်ယောင်ပြုထားသော မျက်နှာမျိုး ပြောင်းသွားရပြီလေ ...။ မောင့်ကိုယ်မောင်ပင် ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် ဒီလောက်အပြောင်း အလဲများမှန်း သိနိုင်မည်မဟုတ်။ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ဖြစ်သော ကျွန်မ ၊ မောင့်မျက်နှာကို စာအုပ်တစ်အုပ်လို ဖတ်ရှုခွင့်ရခဲ့သော ကျွန်မက ပြောင်းလဲသွားသော မောင့်မျက်နှာတွေကို အံ့လည်းအံ့သြ ၊ တုန်လည်း တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့် သိခဲ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် ကျွန်မသိခွင့်ရခဲ့သော မောင့်မျက်နှာက ကျွန်မကိုအကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်စေခဲ့ ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျက်သုဉ်းစေခဲ့သည်။ အဲဒီနေ့က နောက်ဆုံးပေါ် စကားပြောစက်တွေရဲ့ အလယ်မှာ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရဲ့ ဧည့်သည်အဖြစ် ကျွန်မက လိုက်ပါရောက်ရှိနေခဲ့သည်။ တိုက်ဆိုင်သည်မှာ မောင်ကလည်း အဲဒီနေရာကို ရောက်နှင့်နေခဲ့သည်ပင်။ ကျွန်မလို ဟိုငေးသည်ငေးဧည့်သည်အဖြစ်နှင့်မဟုတ်။ ဟိုမေးသည်မေး ဈေးစကားတွေပြောနေသော ၊ စိတ်ကြိုက် ပစ္စည်းရွေးနေသော ၀ယ်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့်။ ပြီးတော့ မောင့်နံဘေးမှာ မောင်နှင့်အတူ ပစ္စည်းရွေးနေသော၊ မောင်..သိပ်အလေးထား ၊ လေးစားရသူပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျွန်မမျက်ဝန်း၊ ကျွန်မမျက်နှာကို မောင့်ထံမှ အတတ်နိုင်ဆုံး သတိနှင့် လွှဲဖယ်နေခဲ့သည်။ မောင်ကလည်း ကျွန်မလိုပင်။ ကျွန်မထက် တစ်ခုပဲပိုသည်။ အဲဒါက .. မောင့်ကို ကျွန်မက လာရောက်နှုတ်ဆက်မှာကို စိုးရိမ်နေသောစိတ်....။အဲဒီ စိတ်ကလေးက မောင့်မျက်နှာမှာ အထင်းသားပေါ်နေသည်။ ဆိုင်က ပြန်အထွက်မှာမှ မောင့်ကို လှမ်းမြင်သော ကျွန်မသူငယ်ချင်းက အမှတ်တမဲ့နှင့် မောင့်နာမည်ကို ရေရွတ်မိသည်။
ဖျတ်ခနဲ မော့ကြည့်လာတာ .. မောင့်မျက်နှာ မဟုတ်။ မောင့်နံဘေးက မျက်နှာ..။ သူ့မျက်နှာ ၊ သူ့မျက်လုံးမှာ စူးစမ်းစုံစမ်းသော အရောင်တွေက တဖျတ်ဖျတ်ပြေးလို့ပဲ ..။ မောင်ကရော .. မောင့်မျက်နှာကရော အဲဒီအချိန်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေခဲ့သလဲ..။ ကျွန်မကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်..။ သားတစ်ယောက်၏ ရိုကျိုးသော ၊ တစ်ခြားသူမသိအောင် လျှို့ဝှက်ဟန်ဆောင်ထားတာတွေ၊ ဖုံးဖိထိန်းသိမ်းထားတာတွေကို ကိုယ်မသိစေချင်သော လူရဲ့ရှေ့မှာမှ ဖွင့်ထုတ်ဝန်ခံလိုက်ရမှာကို စိုးရိမ်နေသော ၊ ကျွန်မသတ်မှတ်ထားသော လူတစ်ယောက်မှာရှိသင့်သည့် ရိုးသားပွင့်လင်းခြင်းမျိုး အပြည့်အ၀မရှိသော... ယောက်ျားတစ်ယောက်၏မျက်နှာကို တစ်ချိန်တည်း၊တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ကျွန်မ မြင်ခွင့်ရလိုက်သည်။
ကျွန်မကို စူးစမ်းလာသောမျက်နှာနှင့် ရှောင်ဖယ်နေသောမျက်နှာ နှစ်ခုအတွက် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပင် မျှော်လင့်မထားဘဲ ပြုံးပြမိခဲ့သည်။ ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ ခနိုးခနဲ့ တိတ်ဆိတ်စွာရယ်မောမိခြင်းနှင့်အတူ တဆစ်ဆစ်နာကျင်ခြင်းတွေ ပြည့်ကျပ်လျက်...။ အဲဒီအချိန်က မြင်ခဲ့ရသော မောင့်ရဲ့မျက်နှာကြောင့် .. အနှစ်နှစ်အလလ ကျွန်မမက်ခဲ့သော အိပ်မက်များ တစ်စစီဖြစ်သွားခဲ့သည်။ စိတ်ကူးနှင့်ထုဆစ်ခဲ့ရသော ပုံရိပ်လွှာတစ်ခု အပိုင်းပိုင်း ပျက်ကျိုး သွားခဲ့ရသည်...။ တမက်သက်သက် ထားခဲ့ရသော မျှော်လင့်ချက်တွေကို မြေမြှုပ်ပစ်လိုက်ရသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ... မောင့်မျက်နှာတွေကို ဖတ်ခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် ၊ လူတစ်ယောက်မှာ မျက်နှာတွေ အများကြီးရှိနိုင်သည်ဆိုတာကို သိခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် ၊ အပြင်ကမ္ဘာကဟု ကျွန်မထင်မြင်ထားခဲ့မိသော မောင့်ကို ဟောဒီကမ္တာမြေပေါ်က၊ ကျွန်မနှင့် တန်းတူလူတစ်ယောက်ပဲဆိုတာ ကျွန်မနားလည်သဘောပေါက်ခွင့် ရလိုက်သည့်အတွက် ... စွန့်လွှတ်လိုက်ရတာတွေများပေမယ့်လည်း ကျွန်မမှာ နောင်တတွေရှိမနေခဲ့တာတော့ အမှန်ပင်...။
ဒီလိုတွေပြောနေသော ကျွန်မမှာရော.. မျက်နှာဘယ်နှစ်ခု ရှိနေသည်လဲ....။ ဘယ်သူနှင့်မဆို မပြောင်းလဲတတ်သော မျက်နှာတစ်မျိုးတည်းနှင့်လား။ ဒါမှမဟုတ် .....။ မောင့်ထက်များပြားသော မျက်နှာတွေနှင့်လား။
လူနှင့်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကောင်းစွာကျင်လည်ဖို့အတွက် တစ်ခုတက်မကသောမျက်နှာတွေရှိဖို့ လိုအပ်သည်လား။
ကဲ...ရှင်တို့တွေမှာရော ... ။
2 comments at Saturday, August 25, 2007
သူငယ်ချင်း အမျိုးအစား ဘယ်နစ်မျိုးလောက်ရှိမလဲလို့ အမျိုးအစား ခွဲခြားကြည့်မိတယ်.. ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ သူငယ်ချင်းအမျိုးအစား တော်တော်များများကို ကြုံခဲ့ဖူးတယ်..
စာသင်သားဘ၀တုန်းကဆို တစ်ချို့သူငယ်ချင်းက သူငယ်ချင်းလို့တောင် မပြောနိုင်တဲ့ အတန်းဖော်သာသာ.. သိသလားဆိုတော့လည်း သူ့အကြောင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင်မသိ.. မသိဘူးလားဆိုတော့လည်း သူစာတော်တာ.. သူစာညံ့တာ.. အတန်းထဲမှာ သူ့ကို တခြားသူတွေက ဘယ်လိုသဘောထားတာ.. သူက တခြားသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ကိုယ့်မျက်စိရှေ့ မြင်ဖူး ကြားဖူးနေတာ.. ဒါမျိုးသူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိတတ်ပါရဲ့..
တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေကျတော့ တွေ့တွေ့ချင်းခင်ခဲ့ပြီး တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိလိုက်ချိန်မှာ ဆက်မပေါင်းဖြစ်တော့တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး.. အဲလိုသူငယ်ချင်းမျိုးကျတော့ တစ်ချို့တလေက တစ်ခုခု အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ဆက်မပေါင်းဖြစ်တော့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်.. အဲဒီအမျိုးအစားမှာပဲ နောက်တစ်မျိုးကတော့ လူချင်းသာ တပူးတွဲတွဲမခင်မင်ဖြစ်တာ.. မေးထူးခေါ်ပြော တွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးပေါ့.. တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေက တွေ့တွေ့ချင်းတုန်းက အရမ်းခင်ခဲ့သလို နောက်ပိုင်း တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိသွားတော့လည်း ပိုတိုးပြီးခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုး.. အဲလိုသူငယ်ချင်းမျိုးရတာ သိပ်ကံကောင်းတယ် ဆိုရပါမယ်.. နေရာတိုင်းမှာ အယူအဆတူ စိတ်တူကိုယ်တူမဟုတ်ရင်တောင် အခြေခံသဘောထားလေးတွေ တူနေတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးပေါ့.. ဥပမာ သူများကို ကူညီတတ်တဲ့နေရာမှာ မတွန့်မဆုတ်ကူညီချင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတာချင်း တူတာမျိုးပေါ့..
နောက်တစ်မျိုးကတော့ တွေ့တွေ့ချင်းတုန်းကလည်း ခင်တယ်.. နောက်နှစ်တော်တော်များများမှာလည်း စိတ်တူကိုယ်တူရှိတယ်ထင်ပြီးပေါင်းတယ်.. ဒါပေမယ့် အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ သူ့စိတ်သူ့သဘောမှန်ကို ဘွားခနဲသိလိုက်ရပြီး အဲဒီစိတ်ကလည်း ကိုယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်သဘောမျိုးဖြစ်နေတော့ ဆက်ပေါင်းလို့မရတော့တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး..
နောက်သူငယ်ချင်းတစ်မျိုးကျတော့ တွေ့တွေ့ချင်းတော့ မျက်နှာကြောမတည့်.. ရန်ဖြစ်.. ဒါမှမဟုတ် စကားများ.. ဒီလိုနဲ့နေလာရာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခင်မင်တွယ်တာရတဲ့သူငယ်ချင်း ဖြစ်လာတာမျိုးပါ.. ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အများဆုံးကြုံခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းအမျိုးအစားပေါ့.. ပုံမှန်အားဖြင့် အဲဒီသူတွေဟာ ကျွန်တော်နဲ့ အယူအဆတူ ၊ စရိုက်တူ ၊ ပုံစံတူ.. အပြောအဆိုအနေအထိုင်ပါ တူနေတဲ့ လူတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်.. ကိုယ်လိုလူချင်းတွေ့တဲ့အချိန် ကိုယ့်ပုံစံကို ကိုယ်မသိတဲ့အနေအထားမှာ ကိုယ်လိုလူမျိုးကို ချက်ချင်းလက်ခံရ ခက်သွားတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိပါတယ်.. ကျွန်တော့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းအများစုဟာ အဲလိုပုံစံနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ.. ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းရော.. မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းရောပါပဲ.. အယူအဆတွေ အမြဲတမ်းတိုက်ဆိုင်နေတယ်ရယ် မဟုတ်ပေမယ့် မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာ စိတ်ရှိလက်ရှိ ငြင်းခုန်ပြောဆိုဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးပေါ့.. အမြင်လည်းကတ်တယ်.. ချစ်လည်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းအမျိုးအစားပါ..
ဘယ်လိုသူငယ်ချင်းမျိုးတွေနဲ့ ကြုံခဲ့သည်ဖြစ်စေ.. စတိတ်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားဘ၀တွေ မဟုတ်တော့ရင် သူငယ်ချင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးပဲ ခွဲနိုင်ပါတော့တယ်.. ကျောင်းမှာတွေ့ အလုပ်မှာတွေ့ပြီး ကိုယ်ကျင်လည်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အငွေ့အသက်ကို အတူနားလည်ဖော် သူငယ်ချင်းမျိုး-လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မျိုးရယ်.. အရင်က ခင်မင်လက်စရှိလို့ အခင်အမင်မပျက် သူငယ်ချင်းဆက်ဖြစ်နေတယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အတူရှိမနေ ၊ ကိုယ့်ဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်အငွေ့အသက်ကို အတူမခံစားနိုင်၊ နားမလည်နိုင်တော့တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးရယ်လို့ နှစ်မျိုးနှစ်စားပဲ ထွက်လာပါတော့တယ်..
တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်တော်များများ၊ မတူတဲ့အလုပ်နေရာတော်တော်များများမှာ သူငယ်ချင်းရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ့်လိုနားလည်မခံစားနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးလည်း ကျွန်တော့်မှာမနည်းပါဘူး.. တစ်ဖက်ကတွေးကြည့်ရင် သူ့ဘ၀ကို သူ့လို ကျွန်တော်မခံစားနိုင်တဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးပေါ့.. အဲလိုသူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ဆုံရတဲ့အခါ စကားဝိုင်းမှာ သူ့ဘ၀ထဲကျင်လည်ဖော် သူငယ်ချင်းမျိုးလည်း သူနဲ့အတူ ပါလာမယ်ဆိုရင် သူတို့ချင်းသာ နောက်ပြောင်ရယ်မောနေတာ၊ သူတို့စကားဝိုင်းထဲ ကိုယ်ဝင်လို့မရတော့တာ ၊ ကိုယ်ဝင်ပြောရင်လည်း ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက အမှတ်မထားတော့တာမျိုးက ကျွန်တော့်စိတ်ကို တော်တော်ထိခိုက်စေပါတယ်.. အဲလိုမျိုး စိတ်ထိခိုက်သွားပြီးမှသာ သူတို့တွေက ကျင်လည်ရာဘ၀ချင်းတူတဲ့သူတွေ.. ကိုယ်နဲ့ အနေအထားမတူဘူးဆိုတာ ပြန်တွေးယူပြီး စိတ်ဖြေရပါတယ်.. အထူးသဖြင့် အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ အလေးအနက်ထားပြီး ခင်မင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်နေခဲ့ရင် ပိုပြီးခံစားရတယ်.. အဲဒီအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်သူငယ်ချင်းမျိုးကိုမှ ကျွန်တော်စ်ိတ်ထိခိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးကို မကြုံရအောင် သူငယ်ချင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါတိုင်း ဖန်တီးနေဖြစ်တာ အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်မယ် ထင်ပါရဲ့လေ..
ခင်မင်သော်လည်း အတူနောက်ပြောင်ရယ်မောခွင့်မရသော သူငယ်ချင်းများစွာအတွက် အမှတ်တရ စာစုပါ..
0 comments at Friday, August 24, 2007
တောင်ပေါ်ကအိမ်လေးဆီပြန်ချင်တယ်.. အိမ်ပြန်ပြီးအနားယူချင်တယ်.. ဒီရက်ပိုင်းမှာ စိတ်ရောလူပါသိပ်ပင်ပန်းတာပဲ.. စာရေးမယ်ဆိုလည်း ခေါင်းထဲမှာ ဘာမှမရှိဘူး.. ရုံးမှာအိပ်ခွင့် မရှိတော့ဘူး.. ဒီညနေ ရုံးအလာ ဓါတ်လှေကားအတက် တစ်ထပ်နဲ့တစ်ထပ်အကြားမှာ မီးပျက်သွားလို့ ၃ မိနစ် ၊ ၄ မိနစ်လောက် ဓါတ်လှေကားထဲပိတ်မိနေသေးတယ်.. ချွေးကိုပျံသွားတာပဲ.. ရုံးရောက်တော့လည်း ရောက်ကတည်းက စာသင်တာ ရုံးဆင်းတဲ့အထိ မနားလိုက်ရဘူး..
0 comments at Tuesday, August 21, 2007
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ညီမလေးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ပြောပါတယ်.. အစ်မက စာရေးတာတော်တော်ဝါသနာပါတာပဲ.. စကားပြောစရာလူ အနားမှာရှိတာတောင် စကားမပြောဘဲနဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့မျက်နှာအပ်ပြီး စာချည်းရေးနေတယ်တဲ့.. သူ့စကားကိုကြားတော့ ကျွန်တော်ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မိပါတယ်.. သူပြောမှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိထားမိပါတော့တယ်.. ကျွန်တော်နဲ့ လူချင်းမဆုံဖြစ်တော့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆို လူချင်းဆုံတဲ့အခါ ဖုန်းပြောတဲ့အခါ သူတို့ပြောတာသာ နားထောင်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်က စကားသိပ်မပြောဖြစ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် စာရေးဆက်သွယ်ရင်တော့ ကျွန်တော်က စာရှည်ကြီးတွေ ရေးပို့လေ့ရှိပါတယ်.. သူတို့နဲ့လူချင်းတွေ့တဲ့အချိန် မပြောဖြစ်တဲ့စကားတွေ စာထဲမှာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရေးပြီး ပြောဖြစ်ပါတယ်.. G-Talk မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြောကြတဲ့အခါတောင် စာရိုက်ပြီးပြောရင် ကျွန်တော့်မှာ ပြောစရာသိပ်များပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အသံနဲ့ပြောရရင် ပြောစရာစကားရှားသွားတယ်.. သိပ်မပြောဖြစ်တော့ဘူး.. ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကြောင်ကွက်တစ်ခုလား.. ဘယ်လိုစိတ်အစွဲအလမ်းလည်း မပြောတတ်ပါဘူး.. ပုထုဇ္ဇနော ဥမ္မတ္တကော - လူတွေဟာ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ရူးနေတယ်လို့ ဘုရားဟောဖူးတယ် မှတ်တာပဲ... ဆင်ခြေပေးကြည့်တာပါ..း)
0 comments at Monday, August 20, 2007
မှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားလေးတွေပါ.. သူက အိန္ဒိယနွယ်အမျိုးသမီး.. ပြီးတော့ သူ့ရဲ့အဘိုးမှာ ဇနီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်.. သူ့အဘွားက အဘိုးရဲ့ဇနီးအငယ်.. မှတ်ပုံတင်မရှိလို့ ဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်း စီကာပတ်ကုံး သူပြောသွားတာလေးတွေက ရယ်လည်းရယ်ရသလို မောလည်းမောရပါတယ်.. သူပြောတာက ဒီလိုဒီလို..
ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရှိတာ နှစ်ယောက်လုံးမှာ မှတ်ပုံတင်မရှိဘူး.. ဗမာလူမျိုးမဟုတ်တော့ မှတ်ပုံတင်လုပ်ရခက်တယ်.. အဖေနဲ့အမေကွဲတော့ အဖေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေက အဖေ့ဆီပါသွားရော.. သွားယူမယ်ဆိုတော့လည်း အဖေနဲ့တွေ့ရင်သတ်မယ်လို့ အမေကကြိမ်းထားတော့ သွားမယူရဲဘူး.. အဖေမရှိတော့ အမေကပဲ ကုန်သည်လုပ်ဈေးရောင်းကျွေးတယ်.. ခရီးလည်းခဏခဏထွက်ရတယ်.. ငယ်ငယ်ကဆို အမေခရီးထွက်ရင် လိုက်သွားချင်တာ တအား.. အမေကလည်း လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်.. မှတ်ပုံတင်မရှိတော့ အိမ်မှာနေခဲ့ရတယ်.. ဟော အမေနေမကောင်းလို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် အမေ့အလုပ်ကို ၀င်လုပ်မယ်ဆိုတော့လည်း မှတ်ပုံတင်မရှိတာနဲ့ပဲ အမေကနေမကောင်းရက်နဲ့ ခရီးထွက်သွားရရော... အဘိုးရဲ့ဇနီးအကြီး အဘွားဆီမှာလည်း အဘိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေအရှိသား.. ဒါပေမယ့် ရုံးပြင်ကန္နားနဲ့ပတ်သက်ရမှာစိုးလို့လားမပြောတတ်ဘူး.. လုံးဝကို အိမ်အလာမခံတာ.. ကျွန်မလည်း အိမ်ထောင်ကျပြန်တော့.. ယောက်ျားယူပြီး ၄-၅ လလောက်ရှိတဲ့အခါ ယောက်ျားက အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ရတယ်.. အဲဒီခရီးကို ဟန်းနီးမွန်းသဘောနဲ့ လင်မယားအတူတူသွားချင်တာအရမ်းပဲ.. ဒါပေမယ့် မှတ်ပုံတင်မရှိတော့ နင်ပဲသွားလိုက်ပါတော့ဆိုပြီး ယောက်ျားကို တစ်ယောက်တည်းလွှတ်လိုက်ရတယ်.. မှတ်ပုံတင်ရရင်တော့လား.. ခရီးကို မနားတမ်းထွက်လိုက်ဦးမှာ..
သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီး မှတ်ပုံတင် မှတ်ပုံတင်လို့သာ ညည်းလိုက်ချင်ပါတယ်..ခရီးအသွားအလာလုပ် တစ်ရပ်တစ်ရွာမှာ ညအိပ်ညနေ နေတော့လည်း မှတ်ပုံတင်မရှိလို့ မရ.. မှတ်ပုံတင်မရှိတော့လည်း ရှိအောင် အဆင်ပြေပြေလုပ်မပေးချင်... လူပြက်တွေ ပြက်လုံးထုတ်တာ သွားသတိရတယ်.. သစ်ပင်တွေစိုက်စိုက်ဆိုလို့ စိုက်လိုက်ရ.. ခုတ်ခုတ်ဆိုလို့ ခုတ်လိုက်ရ.. ကိုယ်ကမနေနိုင်လို့ ကြားက၀င်ပြောတော့ စိုက်တာတစ်ဖွဲ့.. ခုတ်တာတစ်ဖွဲ့..လို့ ပြန်ပြောတယ်..ဆိုတဲ့ ပြက်လုံးလေးပါ..အဲဒီရုံးက တချို့ဝန်ထမ်းတွေဟာ တစ်ခါတလေတော်တော် စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်.. မြန်မာပြည်မှာနေပြီး အင်းလေးကန်ဆိုတာ မသိ.. အင်းသားဆိုတာမသိ.. အင်းသားဆိုတာမရှိဘူး.. ရှမ်းပဲရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့သူကပြော.. သုခ.. သူတို့ပါးစပ်ထဲမှာ ရှိရာသာ လူမျိုးနာမည်လျှောက်တပ်ရင်တော့ တစ်မိသားစုထဲမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံဖြစ်နေတော့မှာပဲလို့ တွေးမိပါရဲ့..ပြီးတော့ ၀န်ထမ်းတွေနယ်အပြောင်းနဲ့ ကိုယ်တာဝန်ကျရာနေရာမှာ ကိုယ့်သားသမီးကို မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးထားကြည့်.. အဲဒီလူတော့ ဒုက္ခလှလှတွေ့ပြီလို့သာ မှတ်လိုက်တော့ .. အသိ ဆရာတစ်ယောက်ဆို သူ့သားအတွက် ၁၈ နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးဖို့ကို သူတာဝန်ကျခဲ့ဖူးတဲ့ ပြည်အထိ ပြန်ပြီး မှတ်ပုံတင်ရုံးက စာ သွားယူရတယ်.. အဲဒီစနစ်က မှတ်ပုံတင်လုပ်မယ့်သူတွေကို အလကားနှိပ်စက်တဲ့စနစ်လို့ပဲ မြင်တယ်.. င်္ထေ ဆိုတာဘာလုပ်ဖို့ထားတာလဲ.. ဟိုဘက်ရုံးက အချက်အလက်ကို ဒီဘက်ရုံးအ၀င်ပြဖို့အတွက် တစ်နယ်ကနေ တစ်နယ် အပန်းတကြီးသွားဖို့လိုလို့လား.. ရုံးမှာ င်္ထေ လေးတောင် မထားနိုင်ဘူးလားမသိ.. ဟိုရောက်တော့ ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး.. ဒီဘက်ရုံးကပါလာတဲ့ ထောက်ခံစာပြ.. ပြီးရင် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို စာအိတ်နဲ့ပေးလိုက်တာပဲ.. အဲဒါသွားယူတာတောင် ကံမကောင်းရင် ဟောက်စားလုပ်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်သေး.. ဘာမှလည်းမဟုတ်.. ဆရာကြီးဝင်လုပ်ချင်တဲ့သူ အလကားနေရင်း ၀င်နွှာချင်တဲ့သူတွေများနေတယ်.. စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်.. သြော်..မှတ်ပုံတင် မှတ်ပုံတင်...
0 comments at Friday, August 17, 2007
ပူလောင်နေမှာ စိုးလို့ ပါ....။
0 comments at Tuesday, August 14, 2007
စာအုပ်ပုံထဲ အတော်ကြာအိပ်ပျော်နေတဲ့ ဆရာကံချွန်ရဲ့စာအုပ်ဟောင်းလေးကို ပြန်ဖတ်မိပါတယ်..အပျိုစင်တို့သိသင့်သမျှ(၂) စာအုပ်ပါ.. ဆရာ့စာအုပ်တွေက တစ်ခေါက်ဖတ်ဖူးပြီးသားပေမယ့် တစ်ခါဖတ်လိုက်တိုင်း အတွေးသစ်တစ်မျိုးရပါတယ်.. ပထမတစ်ခေါက်ဖတ်စဉ်က သိပ်အလေးမထားမိလိုက်တဲ့ အချက်တွေကို ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ချိန်မှာ တွေ့ရပါတယ်.. မိန်းကလေးတွေအလိမ္မာတိုးဖို့ အတွေးသွက်သွက် အရေးသွက်သွက် အချက်ကျကျ ဒက်ခနဲရေးပြတတ်တဲ့အတွက် ဆရာကံချွန်ရဲ့ ဆောင်းပါးအများစုဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဖတ်လို့မငြီးနိုင်ပါဘူး.. ဘယ်အချိန်ပြန်ဖတ်ဖတ် ဖတ်လို့လည်းကောင်း ဖတ်လည်းဖတ်သင့်တဲ့စာတွေပါ.. အိမ်နဲ့အနေဝေးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် စာအုပ်သာလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိပေးရာ လမ်းညွှန်ပြရာဖြစ်ပါတယ်..
ဆရာ့စာဖတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်လေးတွေကို မှတ်သားမိပါတယ်.. ဆရာကတော့ မိန်းကလေးတွေကို အထူးသဖြင့် ရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတာပါ..
လူဆိုတာ ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေကိုရှာပြီး ကိုယ်လုပ်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်တဲ့.. အ၀တ်အစား ၊ အစားအသောက်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်း ၀တ်ဖို့ ၊ စားဖို့စိတ်ဝင်စားနေရုံနဲ့ ရပ်တန့်မနေဘဲ အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ရပ်တည်နိုင်တဲ့အထိတတ်ကျွမ်းအောင် လုပ်ထားသင့်တယ်လို့ ရေးပြထားပါတယ်.. မိန်းကလေးတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာဆိုတာ ယောက်ျားတွေပဲ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့.. နောက်တစ်ခုက အိမ်ထောင်ကျသွားပြီးရင်လည်း ကိုယ့်ဝင်ငွေအတွက်မဟုတ်တောင် ကိုယ့်သိက္ခာအတွက် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုရှိသင့်ပါတယ်တဲ့.. အဓိကကတော့ ဘယ်အခြေအနေမျိုးရောက်ရောက်(အပျိုကြီးပဲနေနေ ၊ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဇိမ်နဲ့ပဲနေရနေရ) ကိုယ့်အစွမ်းအစတွေ တုံးမသွားအောင် ကြိုးစားဖို့လိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြထားတာပါ..
ကျွန်တော်သဘောကျမိတဲ့ ဆရာ့စကားတစ်ခုက .. သိပိက်ုစိတ်ဓါတ်ကျတဲ့အခါ ထိုင်စိတ်ညစ်မနေဘဲ ခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲကနေ လွတ်မြောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို အလေးပေးစဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့.. ဒါဆိုရင် စိတ်ညစ်နေတာနဲ့ အချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့.. အချိန်မကုန်တဲ့အပြင် စိတ်ဓါတ်အင်အားတွေလည်း မကုန်တော့ဘူးလို့ ဆက်စဉ်းစားမိပါတယ်..
နောက်.. သီတင်းကျွတ်လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ.. “ချစ်သူနဲ့ကွေကွင်းရခြင်းသည် ဒုက္ခ” လို့အများစုက ပြောတတ်ကြတယ်.. အဲဒါကြောင့်လည်း မင်္ဂလာဆောင်ကြ အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်.. ဒါပေမယ့် ချစ်သူနဲ့အတူနေရတဲ့အခါ သုခဖြစ်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကိုကျတော့ မေ့ထားတတ်ကြပါတယ်တဲ့..
ဒီတစ်ပတ်မှာ မျှဝေပေးချင်တဲ့ စာအုပ်ထဲက စကားလက်ဆောင်လေးတွေပါ..
0 comments at Monday, August 13, 2007
ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေ.. ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောဖူးသူတွေက ကျွန်တော့်ကို တော်တော်ရင့်ကျက်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်... ရင့်ကျက်တယ်ဆိုရာမှာ ဘာကိုပြောတာလဲလို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်.. လူတစ်ယောက်က သူ ရောက်နေတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့စာရင် သူတွေးတဲ့အတွေး သူလုပ်နေတဲ့အလုပ်က သူ့ ထက်အသက်ကြီးသူတွေတွေးတတ် လုပ်တတ်သလိုဖြစ်နေတာကို ရင့်ကျက်တယ်လို့ ဆိုကြတာလား.. ဒါမှမဟုတ် သူ့ အသက်အရွယ်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အတွေး ၊ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ခံယူချက်တွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိနေတာကိုပဲ ရင့်ကျက်တယ်လို့ ဆိုနိုင်မှာလား.. ပြီးတော့ ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာရော အချိန်တိုင်းမှာပါ ရင့်ကျက်နိုင်ကြပါသလား..
ကျွန်တော်ကတော့ အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ မရင့်ကျက်နိုင်သေးတာ သေချာပါတယ်.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်မကြုံဖူးတဲ့ ကိစ္စတွေ ကြုံလာရတဲ့အခါမှာ ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်နဲ့ ဘယ်တော့မှ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်မဆိုင်နိုင်ခဲ့လို့ပါပဲ.. ရင့်ကျက်တဲ့အတွေးဆိုတာလည်း ကျွန်တော့်မှာ အမြဲတမ်းရှိမနေခဲ့ပါဘူး.. သတိလေးရှိနေတဲ့အချိန် အသိလေးကပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကိုယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အနေအထားနဲ့ သင့်တော်တဲ့အတွေးကို တွေးနိုင်ပါတယ်.. အဲဒါဟာ မရင့်ကျက်သေးလို့ ” လို့ သတ်မှတ်ရင် ကျွန်တော် မရင့်ကျက်သေးဘူးလို့ ကောက်ချက်ချရမှာပါပဲ..
ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်တော့ တရားရိပ်သာဝင်ပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူအများစု မှတ်ချက်ချတတ်ကြတာလေး ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် အမှတ်ရမိတယ်.. ရိပ်သာကပြန်လာပြီး ဒေါသကြီးနေရင် .. စိတ်ထိခိုက်လွယ်ရင် တရားလည်းလုပ်သေးရဲ့ ဒါမျိုးတွေဖြစ်သလားလို့ ကဲ့ရဲ့စကားဆိုတတ်ကြတာကိုပါ.. တကယ်တမ်းကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတော်ကောင်းအဆင့်(စိတ်ရင့်ကျက်မှုအဆင့်)မှာ အောက်ဆုံးအဆင့်က သောတာပန်ဆိုရင်တောင် လောဘ၊ဒေါသမကင်းသေးပါဘူး.. သူတို့ ဟာ သာမန်လူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် လောဘ၊ဒေါသဖြစ်ချိန်တိုသွားတာပဲရှိတယ်.. လုံးလုံးမဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မှတ်သားဖူးပါတယ်..
သူတို့ တွေတောင်မှ သတိကပ်နေချိန်သာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ထိန်းနိုင်တာပါ.. ရင့်ကျက်သူလို့သာ သတ်မှတ်ခံရသေးတဲ့ သာမန်သူတွေကရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲတမ်းကြီး ရင့်ကျက်တဲ့စ်ိတ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ကျွန်တော် သံသယ၀င်မိပါတယ်..တရားရိပ်သာကနေပြန်လာပြီး လောဘ၊ဒေါသ ကြီးနေတဲ့သူတွေကို အမရပူရမဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် တရားဟောတဲ့အထဲ ထည့်ပြောတာလေး အမှတ်ရမိတယ်.. လောဘဖြစ်စရာ ဒေါသဖြစ်စရာကြုံရင် သည်းခံလိုက်ပါ.. တရားရသွားလို့ သည်းခံတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်အားထုတ်တဲ့တရားကို အားနာလို့ သည်းခံလိုက်ပါတဲ့.. အဲဒီတော့ ရင့်ကျက်တယ်လို့ ချီးမွမ်းခံရတဲ့သူတွေလည်း ကိုယ်ကလေးဆန်ချင်တဲ့နေရာမှာတောင် အချီးမွမ်းခံရတာလေးကို အားနာပြီး ရင့်ကျက်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့...
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ (အသက် ၆၀ ၊ ၇၀ ထိ အသက်ရှည်ရှည်နေရတဲ့အခါ) စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လုပ်စရာအလုပ်တစ်ခုရှိနေမှ ကောင်းမယ်လို့ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ပိုတွေးမိနေပါတယ်.. အထူးသဖြင့် ၀န်ထမ်းလုပ်နေသူတွေပေါ့.. ကျွန်တော် သတိထားမိသမျှ ၀င်ငွေရတဲ့အလုပ်ကို မလုပ်တော့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူရာမ၀င်တော့တဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်လွယ်ပါတယ်.. အတူနေအသက်ငယ်သူတွေက ပုံမှန်အတိုင်း အရင်ကလို ပြောဆိုဆက်ဆံနေရင်တောင်မှ သူတို့ကို အရေးမထားပစ်ပယ်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး သူတို့မှာဖြစ်ဖို့ ပိုလွယ်ပါတယ်.. သူတို့တွေက လူကသာအလုပ်ကနေ အနားယူလိုက်တာသာရှိတာ.. သူတို့ရဲ့စိတ်တွေက အနားမှမယူနိုင်ကြဘူး.. သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်း အရင်လို လုပ်စရာကိစ္စတွေ ထည့်ထားစဉ်းစားနေစရာ မရှိတော့ဘူး.. အရင်ကထက် ပိုပြီးအားလပ်နေတဲ့စိတ်က တောင်တွေးမြောက်တွေး ဖြစ်ဖို့ရာ ပိုလွယ်ပါတယ်.. ၀င်ငွေရတဲ့အလုပ်ကနေ အနားယူလိုက်တာနဲ့ ဘာသာရေးဘက်ကို လုံးဝနှစ်မြှုပ်လိုက်နိုင်တဲ့ သက်ကြီးတစ်ချို့အတွက်တော့ လုပ်စရာအလုပ်ရှိသွားတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ.. စိတ်ကို ထိန်းတဲ့အလုပ်ပေါ့.. ဒါတောင်မှ သူတို့စိုက်လိုက်မတ်တပ် လုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်က ၀ိပဿနာအလုပ်မဟုတ်ရင် စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ သိပ်မသေချာသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်.. အငြိမ်းစားယူပြီး စိတ်မတည်ငြိမ်နိုင်တဲ့ အငြိမ်းစားတွေကိုကြည့်ပြီး အတွေးတွေပွားမိပြန်ပါတယ်..
ကျွန်တော်သာ ၀င်ငွေရတဲ့အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ သက်ကြီးပိုင်းအထိ အသက်ရှည်မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ်.. စာရေးစာဖတ်အလုပ်ကို ပိုလုပ်မယ်.. ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက် ခုထက်ပိုပြီး အချိန်ပိုပေးမယ်..ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့အတူနေရတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ဘ၀ကို နားလည်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်.. အထူးသဖြင့် သူတို့တွေရဲ့စိတ်ပေါ့.. သူတို့ရဲ့စိတ်တွေ အတွေးအခေါ်တွေ ခံယူချက်တွေ ရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားတွေကို နားလည်အောင် ကြိုးစားနိုင်တာလည်း ကိုယ်ကအသက်ကြီးလာသလို စိတ်ပါကြီးရင့်လာဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်..ပြီးတော့ လူငယ်တွေကို နားလည်အောင် ကြိုးစားတဲ့သက်ကြီးတွေဟာ သက်ကြီးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ၀င်ဆံ့သလို လူငယ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာလည်း အနည်းနဲ့အများ ၀င်ဆံ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်..အဲဒီအခါ စိတ်ပျိုကိုယ်နုနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးပါရနိုင်တယ်..ပြီးတော့ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်တွေကလည်း ဘယ်တော့မှ ခေတ်နောက်ကျကျန်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိပါရဲ့.. ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. ရောက်တက်ရာရာလေးတွေပါ..
0 comments at Sunday, August 12, 2007
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ ပြောဖြစ်တာလေး ရေးပြချင်ပါတယ်.. လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဝေေ၀ဆာဆာ အပြောလေးတွေကိုသာ သဘောကျတတ်ပြီး စိတ်ရင်းအတိုင်း ခင်မင်ဆက်ဆံတဲ့ (ကိုယ်မှားနေတဲ့အခါ ကိုယ့်သဘောကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြောဆိုပြတတ်တဲ့ ) ကိုယ့်ကို အစစ်တွေချည်းသာ ပေးတတ်တဲ့သူမျိုးကို မကြိုက်တဲ့သူဟာ ဘယ်တော့မှ အစစ်မရပါဘူး.. သူတို့တွေဟာ အတုနဲ့သာ ထိုက်တန်တဲ့သူတွေပါလို့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက ပြောပါတယ်..
ဘ၀စာအုပ်ကြီးထဲက ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့.. အဲဒီအကြောင်းအရာလေးကို ကျွန်တော် ဆက်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်.. ကျွန်တော်အပါအ၀င် လူအများစုက ချိုချိုသာသာပြောတာကို သဘောကျကြတယ်.. စိတ်ထဲကပါပါ မပါပါပြောတတ်တဲ့ အပြောချိုချိုလေးကိုပဲ ကြားချင်ကြတယ်.. အဲဒီအခါ ဘာဆက်ဖြစ်သလဲဆို ကိုယ့်ကောင်းရာကောင်းကြောင်း ကိုယ့်သဘောကို ဆန့်ကျင်ပြောတတ်တဲ့သူကို အနည်းနဲ့အများ ရှောင်ချင်လာပြီး ကိုယ့်အကြိုက်လိုက်ပြောတတ်သူကိုသာ သဘောကျချင်တယ်... သိသိသာသာကြီး မြှောက်ပြောတတ်တဲ့သူကိုသာ သဘောမကျချင်နေမယ်..မသိမသာနဲ့ အမှန်တစ်ဝက် အမှားတစ်ဝက် မြှောက်ပင့်ပြောတတ်သူတွေကိုတော့ အနည်းနဲ့အများ သဘောကျတတ်တယ်ဆိုပါတော့... အဲဒီအခါ ကိုယ့်ကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပြောပေမယ့် မချိုသာတဲ့စကားတွေကို နားထဲမ၀င်ချင်တော့ဘူး.. ချိုသာဝေဆာတာကိုပဲ လိုလားတဲ့အခါ အဲဒီသူဟာ အမှန်အကန်စကားတွေကြားဖို့ နည်းနည်း အလှမ်းဝေးသွားပါရော.. တစ်ခါတစ်လေ အမှန်ကို ထောက်ပြပြောဆိုခံရပေမယ့် နားဝင်မချိုလေတော့ အမှန်ကို ပြောပြတယ်မထင်.. ကိုယ့်ကို ကန့်လန့်တိုက် ပြောတယ်လို့သာ ထင်ပြီး နားဝင်အောင်ပြောတတ်သူရဲ့ စကားသာ နားထောင်မိတော့တယ်..
ကျွန်တော်ပြောတာ စကားချိုချိုပြောတတ်သူတွေကို အပြစ်တင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး.. ချိုချိုသာသာ ပြောတတ်ဆိုတတ်တာကို ကဲ့ရဲ့နေတာ မဟုတ်ပါဘူး... စိတ်ရင်းအမှန်(ကောင်းလည်းကောင်း မှန်လည်းမှန်တဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ ) ပြောဆိုတဲ့အခါ ချိုချိုသာသာ ပြောဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့လေ.. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကအဲလိုဖြစ်အောင် နေသင့်တာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပြောဆိုလာတဲ့သူတွေရဲ့စကားကို မချိုသာလို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ပစ်ပယ်ထားတာမျိုး အဲဒီလူကို အပြစ်တင်မိတာမျိုး မလုပ်မိအောင် ကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားရမယ်လို့ တွေးမိပါရဲ့..
0 comments at Thursday, August 09, 2007
အဖြေတစ်ခုကို ကျွန်တော်စောင့်နေရတယ်...တစ်လနီးပါး အချိန်ယူပြီးလုပ်ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုရဲ့ အဖြေဟာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုပြီး ကျွန်တော်ရင်ခုန်နေမိပါတယ်.. ကိစ္စတစ်ခုပြီးပြတ်သွားလို့ စိတ်မောတာတစ်ခု ပျောက်သွားပေမယ့် အဲဒီကိစ္စရဲ့ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်က ကျွန်တော့်ရင်ကို ပိုမောစေမလား.. မောသမျှတွေပြေစေမလားဆိုတာတော့ မသိနိုင်သေးပါဘူး..ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အဲလိုမျိုး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်မျှော်ရတဲ့အရသာကို ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်.. ဒါကိုပဲ ဘ၀လို့ ကျွန်တော်ထင်မိတယ်..
ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်..ရည်မှန်းချက်တွေ ထားကြတယ်..ရည်မှန်းရာကို ရောက်အောင်သွားကြတယ်.. ရည်ရွယ်ရာကို ရောက်သူရောက်ပြီး မရောက်သေးတဲ့သူက မရောက်ကြဘူး.. တစ်ချို့ဆို ရည်ရွယ်ရာမရောက်လိုက်ဘဲ လက်ပြကျောခိုင်းသွားရတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါက်တာမတင်ဝင်းရဲ့စာတစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးလိုက်သလို သေတာထက်သည်းတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး ဆိုတဲ့စကားလေးကို ကျွန်တော် သိပ်သဘောကျမိပါတယ်..သေသွားရင် ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လောက်ကြီးပဲကြိုးစားချင် ကြိုးစားချင်..အားလုံးကို ထားခဲ့ရမှာ ..အဲဒါကြောင့် ရည်ရွယ်ရာရောက်အောင် ကြိုးပမ်းလို့ရနေသေးတာဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဆုလာဘ်တစ်ပါးလို့ ယူဆနိုင်ပါသေးတယ်..
ရည်ရွယ်ရာအတွက် ကြိုးပမ်းရင်းရလာတဲ့ ရင်ခုန်လှိုက်မောခြင်း ၊ ပင်ပန်းမောလျခြင်း ၊ စိတ်ဓါတ်ကျဆုံးခြင်း ၊ မျှော်လင့်အားတက်ခြင်းတွေ ကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်တွေကို အသက်ဝင်စေပါတယ်.. အဲဒီနေ့ရက်တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ဘ၀ပါပဲ.. ကျွန်တော်ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာ ပြနိုင်တဲ့ အချိန်တွေပါပဲ.. အေးငြိမ်းငြိမ်သက်တဲ့ အောင်မြင်ရာအရပ်ကို ရောက်ရှိတဲ့ကာလတွေကိုလည်း ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်..ဒါပေမယ့် အဲဒီကာလဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ရင်ခုန်ခြင်းကင်းတဲ့ အေးငြိမ်းရွှင်လန်းခြင်းကိုပဲ ပေးပါတယ်..ကျွန်တော်တမ်းတမိတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ရင်ခုန်စရာနေ့ရက်တွေကိုပါ..
2 comments at Monday, August 06, 2007
၂၀၀၇ နှစ်ဦးပိုင်းထိ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ လေပြေငယ် ကဗျာတွေဟာ ၁၈ ပုဒ်အရမှာ ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ.. ဟိုအရင်ကထင်ခဲ့ဖူးတယ်.. မနှိုင်းကောင်းနှိုင်းကောင်း ဆရာဇော်ဂျီက ဗေဒါလမ်းကဗျာ (၄၁) ပုဒ်ကို သူ့တစ်သက်တာမှာ ရေးသွားခဲ့တယ်.. ကျွန်တော်ကလည်း လေပြေငယ်ကဗျာကို နံပတ်စဉ်အများကြီးနဲ့ တစ်သက်လုံးရေးသွားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်..
ခုတော့လည်း အဲဒီအတွေးတွေက အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပါပြီ... အရင် အတိတ်နေ့ရက်တွေတုန်းက လေပြေငယ်ကဗျာတွေဖတ်ရင် အဲဒီကဗျာတွေရေးစဉ်က ခံစားချက်ကို ပြန်ရပါတယ်.. ခုလေးတင်ပဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး ဖြစ်သွားသလို ကဗျာဖတ်တိုင်း ပြန်ပြီးခံစားရတာပါ.. ခုတော့ ဒီကဗျာတွေက ခံစားချက်ကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်တော့ပါဘူး.. အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပဲ ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတော့တယ်... ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပဲ ကိုယ်စားပြုပါတော့တယ်..
ကဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၊ လေပြေငယ်ကဗျာကိုဖတ်တိုင်းရတဲ့ ခံစားချက်ကတော့ လေပြေနဲ့အတူ ပါသွားခဲ့ပါပြီ..ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ လေပြေလည်းချုပ်ငြိမ်း.. မုန်တိုင်းလည်းရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပြီ.ဆည်းလည်းသံကိုလည်း မကြားရတော့သလို ၀ါးရုံပျိုတွေလည်း မလှုပ်ခတ်တော့ပါဘူး... ပန်းစုံတောက လေပြေပုံပြင်တွေလည်း ဘယ်သူကမှ မပြောအားကြတော့ပါဘူး..ဒါကိုပဲ ဘ၀လို့ခေါ်တယ်ထင်ပါရဲ့.. ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး ပျက်ချိန်တန် ပျက်သွားခဲ့တော့တာလေ...
0 comments at Monday, August 06, 2007
ကျိန်စာသင့်ရပ်ဝန်း (သို့) လေပြေငယ်-၁၈
မင်းသိ မသိ ငါမသိပေမယ့်..
အဆုံးသတ်ကို စတင်ခြင်း (သို့) လေပြေငယ်-၁၇
လောကအနှံ့ ခြေဆန့်တော့မယ်ပေါ့ .....။
တိတ်တဆိတ် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ ရဦးမယ်လို့
နေရောင်မှာ တောက်ပစိုလက်နေရဲ့ .....။
ခဏ ခဏ ရောက်လာတတ်တော့
ခဏ ခဏ ခံစားမိတာ
နောင်တတို့ကင်း လွတ်လပ်ပေါ့ပါးခြင်းတွေ စိုး ..မိုး...လျက်....။
ခပ်မဆိတ်... ငါနေတတ်ခဲ့ပြီ ...။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ မပျော်ဝင်နိုင်သေးတဲ့ ..
ပြက်တစ်ခါ .. ပျောက်တစ်လှည့် .....။
ရင်ရပ်ဝန်းမှာ အသော့နှင်နေဆဲ .....။
ငါ့ရဲ့ဝင်သက်တွေမှာ တလျသသ ....။
ပျပျမွမွ ခပ်လွလွနဲ့ ...
0 comments at Sunday, August 05, 2007
အိပ်မက်မက်ရင်း မိုးလင်းတဲ့နေ့ (သို့ ) လေပြေငယ်-၁၂
ပန်းလေးတွေက ပြောကြတယ် .....။
မင်း ... အသင့်ရှိနေပြီလား
“မသိတော့ဘူး ...” တဲ့
ငှက်လေးတွေက ပြောကြတယ် ......။
ရှိ ... စေ...တော့.....
အိပ်မက်မှထမြောက်ပြီးနောက်(သို့ ) လေပြေငယ်-၁၁
ဒီအရှုံးနဲ့ပဲ ကျေနပ် ...။
ဖြုန်းကနဲပေါ်လာတဲ့ လွင်ပြင်ထက် ...
မင်းရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ပြခဲ့တယ်...။
နေ့တစ်နေ့ကတော့ အရင်လိုစီးဆင်းဆဲ ...။
မုန်တိုင်းတို့ စဲသွားခဲ့ပြီလို့ ..
နောင်တကိုကျွမ်းလောင်စေပြီးနောက် (သို့) လေပြေငယ်-၉
ထပ်ရနိုးနိုးနဲ့ မျှော်ကိုးမိခဲ့ ....။
ရနံ့နှင့်အတူ ထမြောက်ခွင့် (သို့) လေပြေငယ်-၈
တိုးလျလျ မင်းရဲ့အသံကိုပေါ့ ....။
ရှင်သန်ဆဲ ငါ့အိပ်မက်တွေမှာ ...
အစသစ်(သို့ ) လေပြေငယ်(၇)
ငါ့ ပစ္စုပ္ပန်ဟာ နုပျိုလျက်ပေါ့ ...။
လန်းဆတ်တဲ့ မင်းလက်ဆောင်တွေ ..
ငါ့အချိန်တိုင်းမှာ ပျံ့ နှံ့ တည်လို့ ..
0 comments at Saturday, August 04, 2007
မျှော်လင့်ခြင်း၏ အစွန်းတစ်ဘက်မှာ (သို့ ) လေပြေငယ်-၆
မင်း .. ရှိရာ အရပ်ကိုပေါ့...။
မင်းသိရင် ရယ်မလားကွယ် ...။
ငါ့ကို လျစ်လျှူ ရှုသွားပြန်တယ် ...။
ငါ့သတင်းစကား မင်းအပါးပြောကြားပေးမလားပေါ့ ........။
အားငယ်မှုနွံအိုင်မှာ လှုပ်လေမြုပ်လေဖြစ်နေ..ဆဲ .
“နိုးထလှည့်တော့ ကလေးရယ် ..
ကစားချိန်ကျ ကစားခွင့်ရ..ရစေမပေါ့ ” တဲ့ ....။
မင်းနဲ့ကစားခွင့် မျှော်လင့်ချက်တွေခဏမြေမြှုပ် ...
ခပ်ဖွဖွ တ..သနေဦးမှာပါ ..
မထင်မှတ်သော(သို့ ) လေပြေငယ်-၅
ငွေ့ငွေ့ မက ကျန်ဆဲ ....
လောကအနှံ့ ခြေဆန့်ရော့မယ် ...
မုန်တိုင်းရဲ့ ဒဏ် အလူးအလဲခံပြီး
မင်းကို တမ်းတရဆဲပါလား ....။
သက်ပြင်းသဲ့သဲ့တော့ ချလိုက်မိတယ် ....။
ငါ့နှလုံးသားကို ထွန်ယက် ...
မေ့မူးခဲ့တဲ့ .. ငါသာ
အပြစ်ရောက်သူ ဖြစ်နေပေါ့ ....
. . . . . . . . . ။
လွတ်မြောက်ချင်တဲ့ ငါဟာ .......
0 comments at Friday, August 03, 2007
ဝေဒနာခါးတွေ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ...
အချိန်ခါးခါး (သို့) လေပြေငယ်-၂
မုန်တိုင်းကာလသည် ၂၀၀၂ ခု မတ်လလယ်တွင်စတင်ပြီး
တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၁၅၀၀) နှုန်း တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်” .....။
အဆွေးလှိုင်းပုတ်လို့ အသည်းတွေက စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့....
လေပြေရဲ့ အထွေးအပွေ့ ငါ..မမေ့ရက်ဘူး...
ဒီအတွေ့ ရဲ့ အလွန်မှာ ..မင်းရှိနေတာ...
ကျောင်းမှာတုန်းက “လေပြေငယ်” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကဗျာမဟုတ်တဲ့ ကဗျာတွေကို ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်.. ရေးခါစက နောက်ဆက်တွဲကဗျာတွေ ရေးဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး.. ကျောင်းမှာ ကဗျာစာအုပ်တွေထုတ်ကြတော့ သူငယ်ချင်းတွေက ကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဆက်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..ကာရန်မပါတဲ့ကဗျာတွေထဲမှာ ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံးရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ..ဒါပေမယ့် ကာရန်အလွတ်ချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒီကဗျာတွေမှာ အဖြစ်အပျက်က မဆန်းသစ်ပေမယ့် စကားလုံးကို အဓိကထား ရေးဖြစ်ထားပါတယ်..ကျွန်တော့်ကဗျာတွေက မော်ဒန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး.. ဘာရယ်လို့လည်း ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူး.. ကဗျာလို့တောင် ဆိုနိုင်ချင်မှ ဆိုနိုင်မယ့် ကျွန်တော်ရေးချင်တာ ရေးထားခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေပါပဲ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကဗျာလို့ပဲ ထားလိုက်ပါတော့.. ဒီကဗျာတွေကို နေးတစ်မြန်မာဖိုရမ်မှာ To Breeze ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ တော့ပစ်တင်ဖူးပါတယ်..၂၀၀၁ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေပါ.. ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်..ကဗျာပုဒ်ရေတော်တော်များများမှာ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီ ရှိပါတယ်.. တစ်ချို့ကဗျာတွေက ခေါင်းစဉ်သပ်သပ် မပေးချင်တော့လို့ လေပြေငယ် နံပတ်ဘယ်လောက်လို့ပဲ ပေးတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်..ခံစားကြည့်ကြပါ..ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် အမှတ်တရကဗျာတွေပါ..
နားလည်ပြီး မျှော်လင့်ခြင်း (သို့) လေပြေငယ်-၁
“ဘုရားသခင်က လူတစ်ယောက်ကို ဖျက်ဆီးချင်ရင်
ငါ...တကယ်ကို သိနေခဲ့တာပါ ....။
မင်းရဲ့အဖော်ကို ကြည်နူးမှုအပြည့်နဲ့ ဧည့်ခံရင်း
3 comments at Tuesday, July 31, 2007
ဒီရက်အတွင်း အတွေးတစ်ခုကိုပဲ တွေးမိနေပါတယ်..ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေကို အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ့် အဆုံးအဖြတ်တွေကို သိပ်ပျော်ရွှင်နေချိန်နဲ့ သိပ်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာပါပဲ..အဲဒီအချိန်မျိုးတွေမှာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်အများစုဟာ မှားယွင်းတဲ့လမ်း ဒါမှမဟုတ် စိတ်မချမ်းသာစေတဲ့ အဖြစ်တွေကိုပဲ ရလာစေတယ်လို့ ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်.. သိပ်ပျော်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် သိပ်စိတ်ညစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိအနေအထား ၊ တကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားကနေ ဝေးကွာနေတာပဲလေ..ကျွန်တော်အပါအ၀င် ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူအများစု တစ်ခုခုလုပ်ရင်း စိတ်ညစ်တယ်လို့ အသည်းအသန်ညည်းလာပြီဆိုတဲ့အခါ မေးကြည့်ရင် အဲဒီအလုပ်တွေကို သိပ်ပျော်တဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် သိပ်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်.. အလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်တာကအစ အိမ်ထောင်ပြုတာက အဆုံးပေါ့.. တစ်ခါတစ်လေဆို တကယ့်သေးသေးမွှားမွှားကိစ္စလေးတွေကိုတောင်မှ သိပ်စိတ်ညစ်-သိပ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း စိတ်ညစ်စရာတွေပေါ်လာတတ်တာလည်း ဖြစ်နေတတ်သေးတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်မိတယ်...
1 comments at Thursday, July 26, 2007
ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ သူတွေရှိတယ်.. တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဆရာတစ်ယောက်ပါ.. ကွန်ပျူတာ field ထဲကိုရောက်တော့ သင်တန်းတွေတက်ဖြစ်တယ်.. အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆရာနဲ့သင်ရပါတယ်.. စာသင်ကောင်းလွန်းသူမဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ဝင်စားအောင်တော့ ပြောတတ်ပါတယ်.. သူ့အနေအထားနဲ့ ကျွန်တော်တို့အနေအထားနဲ့ ပညာချင်းသိပ်ကွာပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို ဆရာအမြဲပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်.. စာများများဖတ်ပါ.. မင်းတို့တွေ ဆရာ့ထက်တောင် တော်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့.. ဒါက ဆရာ့ရင်ထဲကလာတဲ့စကားမှန်း ဆရာ့ဆီမှာ စာသင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ခံစားနားလည်နိုင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ကို စာသင်တဲ့ကာလတလျှောက်လုံး နှိမ်တဲ့စကား၊ အထက်စီးကြီးနဲ့ပြောတဲ့စကား တစ်ခွန်းတစ်လေမှ ဆရာ့နှုတ်က မထွက်ခဲ့ပါဘူး.. ပညာတတ်မာန ဆရာ့ဆီမှာရှိမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မငြင်းပေမယ့် မာန်မာနမထောင်လွှားတတ်တာ ၊ သူတစ်ပါးကိုမချိုးနှိမ်တတ်တာကြောင့် ဆရာ့ကို ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်..
တစ်ယောက်က ဆယ်တန်းမှာကတည်းက ခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းပါ.. သူ့အဖေနဲ့ အမေက ဆရာဝန်တွေဖြစ်သလို သူကိုယ်တိုင်လည်း ဆရာဝန်ပါ.. သူဆေးကျောင်းတက်နေဆဲမှာ သူညည်းခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်.. အဲဒီစကားကြောင့်လည်း သူ့ကို ကျွန်တော်လေးစားမိတာပါ.. သူ့အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်လုံးက မြန်မာပြည်မှာ မရှိပါဘူး.. တခြားနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ ဆရာလုပ်နေကြပါတယ်.. သူ့အဖေအမေရဲ့ မိတ်ဆွေတွေရယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေရယ် သူနဲ့ ပြန်တွေ့တိုင်း သူ့အကြောင်းကို အဓိကထားမမေးဘဲ သူ့အဖေအကြောင်းကိုသာ တခုတ်တရမေးကြတဲ့အတွက် သူခံပြင်းပါသတဲ့.. ဘယ်နေရာမှာမဆို သူ့အဖေရဲ့သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ဆက်ဆံခံရတာကို သူမကျေနပ်နိုင်ပါဘူး.. သူ့အဖေရဲ့အရိပ်ကလွတ်ချင်ပါသတဲ့.. သူ့ကို “သူ” အဖြစ်သာ ခင်မင်ဆက်ဆံစေချင်ပြီး သူ့အဖေရဲ့သမီးအဖြစ်နဲ့ ပြောဆိုခင်မင်ကြတာကို သဘောမကျနိုင်ပါဘူးတဲ့.. သူ့အဖေရဲ့ အရှိန်အ၀ါကိုမခိုချင်တဲ့ သမီးတစ်ယောက်အဖြစ် သူ့ကို ကျွန်တော်လေးစားရပါတယ်.. စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ ပါးမပြောင်ချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်လို့ ကင်ပွန်းတပ်ချင်ပါတယ်…
တစ်ယောက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ.. လူချင်းအရမ်းရင်းနှီးတဲ့သူမဟုတ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့အရည်အချင်းတွေကြောင့် ကျွန်တော်လေးစားခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ.. သူဆယ်တန်းအောင်တော့ ဆေးကျောင်းတက်ခွင့်ရပေမယ့် အိမ်နဲ့အတိုက်အခံလုပ်ပြီး ကွန်ပျူတာကျောင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ဓါတ်ပြတ်သားမှုကို ကျွန်တော်အားကျမိတဲ့အကြောင်း ပြောတဲ့အခါ.. တစ်ချို့ယောက်ျားများစွာလို ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးသထက် ကြီးအောင်လုပ်တဲ့စကားမျိုးမပြောဘဲ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးနဲ့ ကျောင်းတက်ရတာသိပ်ကို စိတ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ တစ်ပါးသူတွေလို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်လို့မရတဲ့အကြောင်း သူ့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ညည်းညည်းညူညူပြောခဲ့တာကို ကျွန်တော်အမှတ်ရမိပါသေးတယ်.. ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးသူကို အထင်ကြီးသထက်ကြီးအောင် မလုပ်ဘဲ သူ့ဘ၀မှာ စိတ်ပျက်စရာအစိတ်အပိုင်းတွေရှိတဲ့အကြောင်း အမှန်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကိုလေးစားရပါတယ်..
တစ်ယောက်ကတော့ သူငယ်ချင်းပါပဲ.. ငယ်ငယ်ကဆို မျက်နှာချင်းမဆိုင်လိုက်နဲ့ ဆိုင်တာနဲ့ ရန်ချည်းဖြစ်ခဲ့ပြီး မတည့်ခဲ့တဲ့ ၊ မိဘတွေနယ်အပြောင်းအရွှေ့ကြောင့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကျော်ကွဲသွားခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းပါ.. လူချင်းမတွေ့တာ အတော်ကြာပါပြီ.. ခုချိန်ထိလည်း ပြန်မတွေ့နိုင်သေးပေမယ့် မိမိယုံကြည်ရာမှာ တသတ်မတ်တည်း ရပ်တည်တတ်တဲ့သူ ၊ အလုပ်လုပ်ရာမှာ လူထက် “မူ”ကိုဦးစားပေးလုပ်ကိုင်တတ်သူအဖြစ် လူသတင်းလူချင်းဆောင်လို့ အဝေးစကားတွေအရရော.. သူ့ရဲ့ ဖိုရမ်ပေါ်က“စာ”တွေအရပါ ကျွန်တော် လေးစားရသူတစ်ယောက်ပါ..
ကျွန်တော်သူတို့ကိုလေးစားအားကျတဲ့အတွက် သူတို့လိုအရည်အချင်းမျိုးကို ရချင်မိတယ်.. သူတို့လိုစိတ်ဓါတ် အရည်အချင်းမျိုးကို ကိုယ့်ဆီမှာ အပြည့်အ၀ဖြစ်ခွင့်မရတောင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ထွန်းလာအောင် ကြိုးစားနေမိတာအမှန်ပါပဲ.. အနည်းဆုံးတော့ စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ ပါးမပြောင်တတ်တဲ့သူမျိုး ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမိပါတယ်.. တခြားအရည်အချင်းတွေတော့ စုတုန်း တုတုန်းပါပဲ..
0 comments at Thursday, July 26, 2007
ဆယ်တန်းတုန်းက ဆရာတစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားကို အမှတ်ရမိပါသေးတယ်.. စိတ်ဆိုးစိတ်နာစရာဆိုရင် သောင်ပြင်မှာရေးတဲ့စာလိုပဲ ဖြစ်ပါစေတဲ့.. ကျောက်ထက်မှာရေးတဲ့စာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့ တဲ့.. ကျောက်ထက်အက္ခရာတင်တဲ့စာမျိုး ဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူအတွက်တော့မသိဘူး.. ကိုယ့်အတွက်တော့ အင်မတန်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီရက်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျွန်တော်ပြန်သတိပေးဖြစ်နေပါတယ်...
0 comments at Wednesday, July 18, 2007
မနက်ဖြန် အာဇာနည်နေ့ပါ.. အာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရ စာတစ်ခုခုရေးချင်လို့ ဒီစာကို ရေးပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က အာဇာနည်နေ့ဆိုရင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ ရေဒီယိုကနေ ဥသြဆွဲတဲ့အသံ လွှင့်ပေးပါတယ်.. ခုတော့ အဲဒီဥသြဆွဲသံကို မကြားရတာကြာပေါ့လေ.. ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အလယ်တန်းကျောင်းသူလောက်ထိ အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တယ်.. ပြိုင်ပွဲမလုပ်ရင်တောင် အတန်းတွင်းမှာ အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးတွေ ရေးရပါတယ်.. မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော် ငါးတန်းနှစ်တုန်းက “အာဇာနည်နေ့ ” အထိမ်းအမှတ်စာစီစာကုံးကို မရေးတတ်လို့ ငိုတဲ့အတွက် အမေကရေးပေးရတာ မှတ်မိပါသေးတယ်.. ခုချိန်ပြန်တွေးမိရင် ရှက်ပြုံးပြုံးမိပါတယ်..
ခုခေတ်ကလေးတွေ အဲလို ရှက်ပြုံးပြုံးဖြစ်မယ့် အဖြစ်မျိုး မဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူး.. တော်တော်များများက အာဇာနည်နေ့ ဆိုတာကို မေ့ကုန်ပြီ.. သိတဲ့ကလေးတွေကလည်း အာဇာနည်နေ့ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ တရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်တွေထဲက တစ်ရက် ၊ ကျောင်းပိတ်ရက်တစ်ရက်ဆိုတာလောက်ပဲ သိကြတော့တယ်.. အာဇာနည်နေ့ရဲ့ အနှစ်သာရ ပျောက်ဆုံးနေတာ ကြာပါပြီ.. အာဇာနည်နေ့ကို အပေါ်ယံအပ,ယိက သဘောကလွဲလို့ ရင်ထဲအသည်းထဲက အလေးအမြတ်ပြုမှုတွေ ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက်နေတာကြာလှပါပြီ.. ဒါပေမယ့် သတိတရ အလေးအမြတ်ပြုနေတဲ့သူတွေ အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိနေပါသေးတယ်..
သေသူတွေက သွားနှင့်ပြီ.. ရှင်သူတွေက လွမ်းရပြီ.. လွမ်းနေရုံနဲ့ ပြီးသင့်ပါသလား.. သေသူကိုအလေးအမြတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ သူ့ ဂူသင်္ချိုင်းမှာ ပန်းခွေချရုံ ၊ မြက်ရှင်းပေးရုံနဲ့ လုံလောက်ပါသလား.. သေသူတွေ မသေခင်က မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ အနာဂတ်ကို ကျွန်တော်တို့ ရနေပြီလားလို့ တွေးကြည့်မိတယ်... မရသေး မရောက်သေးတဲ့ ကျဆုံးသူတွေရဲ့ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပဲ ရလာပါသေးတယ်..
0 comments at Tuesday, July 17, 2007
လက်ဖက်ရည်ကို စသောက်ဖူးတာ ၅ တန်းကျောင်းသူဘ၀က ထင်ပါရဲ့.. မှတ်မှတ်ရရ ရွှေပေါ်ကျွန်းကိုသွားမယ့် မနက်ခင်း ကားဂိတ်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြရင်း သောက်ဖြစ်သွားတာ... လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့တင် ဘာမှ ထပ်မစားနိုင်တော့ဘဲ ရင်ပြည့်သွားပါတယ်.. ဗိုက်ပြည့်တာမဟုတ်ဘူး.. ဗိုက်ကဟာပြီး ရင်ဘတ်ထဲကနေ တစ်ခုခုက ဆီးခံထားသလိုလိုပဲ.. ကားစီးပြီးတော့ သိပ်မကြာဘူး အန်ပါလေရော.. လေတွေချည်းအန်တာ..လူကလည်း မောသွားတယ်.. အဲဒီကတည်းက လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ ကြောက်သွားတယ်...
တက္ကသိုလ်တက်ရတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံးတွဲတဲ့သူငယ်ချင်းက လက်ဖက်ရည်သိပ်ကြိုက်ပါတယ်.. သူကြိုက်တာက ဖန်ချို.. ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မြည်းမကြည့်ခဲ့ဖူးဘူး.. သူနဲ့အတူ ကန်တင်းမှာထိုင်တိုင်း ကျွန်တော်သောက်ဖြစ်တာက ကော်ဖီပါ.. ကော်ဖီကိုကြိုက်လို့လားဆိုတော့ အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် လက်ဖက်ရည်နဲ့စာရင် ကော်ဖီကို သောက်လို့ရသေးတယ်.. ကော်ဖီသက်သက်ကို သောက်ရတာထက် ကော်ဖီနဲ့ နွားနို့ရောသောက်ရတဲ့အရသာကို ပိုကြိုက်ပါတယ်.. နွားနို့ချည်းပဲသောက်ရင် ညှီစော်နံတယ်..ကော်ဖီသက်သက်ချည်းသောက်ရင်လည်း အရသာပေါ့သလိုပဲ.. အဲဒီတော့ နွားနို့ရဲ့ညှီနံ့ကို ကော်ဖီနံ့နဲ့ဖျောက်ပြီး ကော်ဖီရဲ့ပေါ့နေတဲ့အရသာကို နွားနို့အရသာရောလိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် စွဲစွဲမြဲမြဲသောက်ဖြစ်တဲ့ ၊ မသောက်ရရင် မနေနိုင်တဲ့ထဲမှာ ကော်ဖီ ၊လက်ဖက်ရည်၊နွားနို့ တစ်ခုမှ မပါပါဘူး.. အဲလိုပြောလို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ မသောက်ရ မစားရရင် မနေနိုင်တဲ့ အရည်တစ်ခုခု ၊ အစားအသောက်တစ်ခုခုရှိလားဆိုရင် ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီအကျင့်မရှိပါဘူး.. ကြိုက်တာတော့ကြိုက်တယ်.. မစားရရင် မသောက်ရရင် စိတ္တဇဖြစ်လောက်အောင်စွဲတဲ့ အကြိုက်မျိုး အစားအသောက်တွေပေါ်မှာ မဖြစ်ပါဘူး.. ကဲ လက်ဖက်ရည်အကြောင်းလေး ပြန်ဆက်ရေးပါ့မယ်..
တက္ကသိုလ်တက်တဲ့တလျှောက်လုံး လက်ဖက်ရည်သောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် တစ်ခွက်နှစ်ခွက်အပြင် မပိုဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်.. တစ်ခါတုန်းက ထိုင်းနဲ့မြန်မာ ဘောလုံးပွဲကို ကျွန်တော်နဲ့ လက်ဖက်ရည်ကြိုက်တဲ့သူငယ်ချင်း လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကြေးလောင်းကြတယ်.. မြန်မာဘက်က နိုင်ခြေနည်းပေမယ့် မြန်မာဘက်ကပဲ ကျွန်တော်နေတယ်.. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကတော့ ထိုင်းဘက်ကပဲ.. သူက နိုင်ချင်သူကိုး..ကျွန်တော်ကတော့ မဟုတ်ဘူး.. နိုင်ခြေမရှိပေမယ့် ကိုယ့်အသင်းဘက်ကပဲ အားရပါးရ အားပေးချင်တယ်.. တစ်ဘက်အသင်းကို ဆဲစရာရှိ ပြောစရရှိရင် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ပဲ ပြောပစ်ချင်တယ်.. အဲလိုပြောဖို့ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်အသင်းကို နိုင်စေချင်မှသာ အားပါးတရပြောပစ်နိုင်တာလို့ ကျွန်တော်က ခံယူတာ.. အဲဒီပွဲမှာ မြန်မာရှုံးသွားခဲ့တယ်.. လူကျွံဘောနဲ့ဝင်သွားတဲ့ဂိုးကို ထိုင်းကရသွားတာမို့လေ.. သုံးဂိုးသွင်းတာမှ နှစ်ဂိုးက လူကျွံနေတာ.. ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ရှုံးရောဆိုပါတော့.. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို လက်ဖက်ရည်လိုက်တိုက်ရတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ရှုံးပေမယ့် ပြုံးပြုံးပဲ... လူကျွံဘောနဲ့ဂိုးရတာ အထင်မကြီးပေါင်လို့ သူငယ်ချင်းကို လက်ဖက်ရည်တိုက်ရင်း အထက်စီးလေနဲ့ ပြောဖြစ်ခဲ့သေးတယ်.. ဒါ အလောင်းအစားလုပ်ရင်းရှုံးလို့ တိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် အကြောင်းပေါ့...
အရင်တလောက သောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်အကြောင်းလည်း ပြောရပါဦးမယ်.. ကျွန်တော့်ဆီကို ဧည့်သည်လာတယ်.. အဲဒီဧည့်သည်ကလည်း လက်ဖက်ရည်ကို ရေသောက်သလို သောက်တဲ့သူ..သိပ်ကြိုက်တယ်ပေါ့.. ဒါနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လိုက်ဧည့်ခံ.. အန်တီဘာသောက်မလဲမေးပြီး စားပွဲထိုးကိုမှာမလို့လုပ်တော့ လက်ဖက်ရည်ကို ဘယ်လိုမှာရမှန်း ကျွန်တော်မသိဘူး.. ဧည့်သည်အန်တီက သူ့အတွက်ပုံမှန်တစ်ခွက်မှာတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်အတွက် ပုံမှန်တစ်ခွက် မှာလိုက်ပါတယ်.. အဲဒီနေ့က ဧည့်သည်အန်တီနဲ့စကားပြောရင်း ကိုယ့်အဖြစ်ကို ရယ်ချင်ပက်ကျိ ဖြစ်နေမိတယ်.. ငါ့နှယ် လက်ဖက်ရည်လေးတောင် မမှာတတ်ဘူးလို့.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီနေ့က လက်ဖက်ရည်ကို အရသာခံပြီး သောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. လက်ဖက်ရည်ကို ပထမဆုံးအရသာခံသောက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ.. သူ့ရဲ့အရသာကိုလည်း နည်းနည်းသဘောကျမိတယ်.. ဒါပေမယ့် စွဲလောက်အောင်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်တော်နဲ့ မတည့်ဘူးလေ..
မနေ့ကလား ...မနေ့တွေက များလွန်းတော့ ဘယ်နေ့မှန်း သေချာမသိတော့ဘူး.. မနေ့များစွာထဲက မနေ့တစ်နေ့ကပေါ့ .. လပေါင်းများစွာ ရက်ပေါင်းများစွာ ကျွန်တော် မေ့ထားခဲ့တဲ့.. သြော်..မဟုတ်ပါဘူး.. မေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး.. တကယ့်အဖြစ်ကို ကျွန်တော်မတွေးမိခဲ့တာ.. သိပြီးသားကိစ္စတစ်ခုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတကယ့်အဖြစ်ကို ဆက်မတွေးမိခဲ့တာ.. ဆက်မတွေးမိလို့ မတုန်လှုပ်မိခဲ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကို ကျွန်တော် ဖျတ်ခနဲတွေးမိလိုက်ရတယ်.. တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရတယ်.. ဒီလိုပဲ လပေါင်းများစွာ ရက်ပေါင်းများစွာ.. ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခု ရေပေါ်မှာရေးတဲ့အရုပ်လို ဖြစ်သွားခဲ့တာ.. အဲဒီအဖြစ်လေးကြောင့် ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာ လွင့်မျောရသလို မှီတွယ်စရာနေရာမရှိ တစ်ညနဲ့တစ်ရက်တိတိ စိတ်ထဲရင်ထဲမှာ လစ်ဟာသွားရတာ.. ညခင်းဘက် အိမ်အပြန်လမ်းပေါ်မှာ တလောကလုံးမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့ မှီတွယ်ရာမဲ့သိမ်ငယ်တဲ့ ခံစားချက်က ကျွန်တော့်ရဲ့ မနေ့များစွာထဲက မနေ့တစ်နေ့မှာ ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်.. ဒါ လွမ်းစရာလား..နည်းနည်းတော့ လွမ်းဆွတ်ဖို့ကောင်းသလိုပဲ..ဒါ တုန်လှုပ်စရာလား..နည်းနည်းတော့ တုန်လှုပ်ဖို့ကောင်းသလိုပဲ.. အဲဒီတုန်လှုပ်မိခြင်းရဲ့ အကျိုးရလဒ်အဖြစ် မဖြစ်နိုင်တာကို ကျွန်တော်မမျှော်မှန်းဖြစ်တော့တာ... အဖြစ်မှန်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးကို မြင်အောင်ကြိုးစားလိုက်မိတာ..အဲဒါကို လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားနေမိတာတွေ ကျွန်တော့်ရဲ့ မနေ့များစွာထဲက မနေ့တစ်နေ့မှာ ဖြစ်ပျက်သွားလေရဲ့.....
Labels: Events, Feeling
0 comments at Friday, July 13, 2007
ကျွန်တော် အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်..ဖိုရမ်လည်း ကောင်းကောင်း မရေးနိုင်..ဘလော့ဂ်ကို လည်း အတူတူပဲ.. ကျွန်တော်အလုပ်ရှုပ်တော့ ခင်ရာမင်ရာ နီးစပ်ပတ်သက်ရာလူတွေလည်း အငြိမ်မနေရပြန်ဘူး.. ကျွန်တော်မေးသမျှ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြေကြရပြန်ရော.. မေးရင်းမှားရင်း ပြင်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်လိုချင်တာကို ရလာပါတယ်.. အဲဒီအတွက် ဖြေပေးသူတွေကို ကျေးဇူးသိပ်တင်တာပဲ.. ကျွန်တော့်မှာ ဒီလိုသူငယ်ချင်းတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရပါမယ်.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အလုပ်က မပြီးဆုံးသေး မအောင်မြင်သေးပါဘူး..ဆက်ပြီးလုပ်ရပါဦးမယ်.. ဘယ်လောက်အောင်မြင်မှာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်မသိနိုင်သေးပါဘူး.. သူများအတွက် ဘာမှမဖြစ်လောက်ပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ နည်းနည်းအရေးကြီးတယ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်မယ့် အလုပ်မို့ပါ.. ဒီလောက်လွယ်လွယ်လေးကိုတောင် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တော့ ကွဲပြီပဲ... နောက်ထပ်အလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်ဖို့ ယုံကြည်ချက်ရှိတော့မယ် မထင်ဘူး... အဲဒါကြောင့် ခုချိန်မှာ ကျွန်တော့်အလုပ်ကို အာရုံစိုက်ရမယ်..